soo laabashada Ciise ka hor fitnada | Apg29
At-qaadida, Ciise yimid, waayo, isaga oo kaniisad markii uu soo gaaray dhamaadkii fitnada, isagu waa u imanayaa iyadoo uu shirka.
Sida kiniisadda ahaa qarsoodi ah in lagu soo dajiyey iyada oo loo marayo Paul, sidaas oo kale waa rayrayn, qarsoodi ah oo la nalagu soo dajiyey. Erayga Giriigga ah waxa qarsoon yahay "Mysterion" halkaas oo huvudbetydningen waa "wax waa cusub oo ayaa ka hor inta aan jirin."
difaaca A for the-trib Pre
E n su'aasha dad badan is weydiiyaan ee la xiriirta soo laabashada Ciise waa marka rayrayn ee Mu'miniinta dhici doona? Waxaan ka hadlaan saddex rajeenayo kala duwan arrinta: cilmiga pre-trib, caqiido dhexe trib iyo cilmiga post-trib. Tani waxay noqon doontaa difaaca u ah cilmiga pre-trib. Taasi waa, in rayrayn ee Mu'miniinta ah dhacdaa ka hor bilowga fitnada.
Sida socda Rabbiga waxaa jira saddex waxyaalood oo waa in aan kala go'no. Waxaa qorshaha Ilaah ee kaniisadda, Israa'iil iyo dadka aan Yuhuudda ahayn. qalad aan inta badan sameeyaan waa in aan isku daraan ballanqaadayadii, iyo qorshaha Ilaah ee Israa'iil, waayo shirka. Markii shirka qaadataa meel reer binu Israa'iil oo taas bedelkeeda waxa ay noqon doontaa khalad. Waa in aan la kala saaro marka Ilaah ku hadla in Israa'iil iyo markii Ilaah hadlaya shirka.
P on time sharciga dadka reer binu Israa'iil, ka sidayaal gaarka ah ee qorshaha badbaadada ee Ilaahay. theme weyn ee GT waa Masiixa, oo uu socda iyo boqortooyadiisa - qurxoon, oo ballan qaaday Kingdom, halkaas oo reer binu Israa'iil u noqon doonaa xarunta dadka, iyo halka dalka reer binu Israa'iil oo Yeruusaalem waxaa jiri doonta xarunta of xarunta juquraafi, siyaasadeed iyo ruuxi ah dhulka.
sharciga Rabbiga soo Siyoon, oo erayadiisana ka tegi doonaa Yeruusaalem ka soo, oo quruumaha oo sii qulquli doonaan si ay. Xaqnimadu, nabad, iyo badbaadintaada adkaan doontaa dhulka this, boqortooyada this nabadda, kaas oo sidoo kale waa Millennium.
The Gaalada iyo Golaha
A quruumaha TT badbaadi lahaa, sida natiijo ah oo ka mid ah xal Masiixa Kingdom Sidaas daraaddeed wax qarsoodi ah ee GT ah. Laakiin Sayidku wuxuu u diyaariyey maamulka gaar ah dadka aan Yuhuudda ahayn, Ruuxa Quduuska ah si ay dhulka u soo diraya, si ay u doortaan dad jannada injiilka Ilaah nimcada oo ah kiniisadda, wuxuu ahaa qarsoodi ah waqti. Sidaa darteed, waxaa kale oo aan shirka ku xusan Axdiga Hore, iyo sidoo kale aad bay u kooban cilmiga Ciise.
qarsoodi ah la yaab leh in aan dadka aan Yuhuudda ahayn u noqday dhaxla ee ballan qaadyada Ilaah, markii ugu horaysay la maray by Rasuul Bawlos ah, oo naftiisii ​​u helay in loo muujiyo Rabbiga. (Efe 3: 3-6, Col. 1: 25-27). Ruuxa Quduuska ah iyo Church loogu kala saari karin dhaqaalaha this. Ruuxa Quduuska ah ayaa bolig joogtada ah ee aaminka ah, wadnaha shirka, oo waa rahaamad aan dhaxalka u helnayna uppryckelsens maalinta ku xigta.
markii Golaha innagu waxaynu nahay macbudka Ruuxa Quduuska ah, macbudka oo kaliya in Ilaah jooga maanta wuxuu ogyahay in dunida. In Ruuxa Quduuska ah uu ka dhigay inuu dhulka, runtii waa dhamaadka, taas oo ah si looga hortago in ka gees ah taagan kartaa.
Ciise Masiix Revelation - Waxa ugu dhakhsaha badan dhici doona hadda dabadeed
Up 1:19 - ku qor erayada hoos wixii aad aragtay iyo waxa ay tahay iyo waxa ay hadda dabadeed wuxuu noqon doonaa.
O Rdet "aakhiro" waa erayga Giriigga ah tauta Meta, taas oo macnaheedu yahay "Waxyaalahaas ka dib" .
Tani waa aayad muhiim ah oo horyaalka oo dhan in Revelation la qoray. Ka dib markii John in la ogol yahay in ay bal eeg riyadii samada ka timid Ciise, uu barto in uu waa in la qoro:
1. In uu arkay. 2. Waa maxay 3. Waa maxay waajibka ah inay hadda. In si kale loo dhigo horyaalka heerka saddex kala ah dajinta.
1. Wuxuu arkay
In cutubka 1: 12-16 arkaa John arkay Ciise ammaanmay taagan oo ku dhex jira toddobada laambadood oo dahabka ahaa (7 kaniisadaha) ah, iyo toddoba xiddigood gacantiisa (7 kaniisadaha Malaa'igta). Wuxuu arkaa Ciise ammaanmay, kaas oo sidoo kale ka kacay guul Rabbiga leeyay. Oo wuxuu isaga u arkaa sida Wiilka Aadanahu waa ammaanmay, sida wanka, libaaxa oo ahayd qabiilka reer Yahuudah ah, iyo xaakinka, kan ugu weyn iyo, iyo Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada.
2. Waa maxay
D t waa muuqaalka guud ee markii Golaha urskillnings, ku salaysan waqtiga sheegid iyo taariikhi ah, oo dhan ee dhalashada shirka loo soo Celin Ciise ah. 7 warqad ay matalayeen shirka iyo horumar ruuxi ah iyada oo da 'iyo rayrayn soo socda.
xarafka ugu horeeya diray Efesos shirka oo ka dhigan markii ugu horeysay ee shirka, kuwaas oo da'da xooda. The toddoba iyo soo dhaafay warqad u soo diray inuu shirka La'odikiya. gudcurka ruuxi ah in lagu xusay warqadda waa sharaxaad ku saabsan waqtiga aad soo dhaafay ka hor inta Ciise celinta. kaniisadda dhammaadka wakhtiga in shirka La'odikiya ee.
3. Maxay u qolof hadda dabadeed wuxuu noqon
O Rdet "aakhiro" waa erayga Giriigga ah tauta Meta, taas oo macnaheedu yahay "Waxyaalahaas ka dib" . Ie sequentially ka dib da'da kaniisadda, kaas oo la soo bandhigay iyada oo 7 warqadda.
Rev 4: 1 - MARKAA (ie, marka waqtiga Golaha dhulka ka badan yahay, iyo waxa uu u ahayd buuxa), waxaan bal eeg arkay, oo, u dhintaan waxaa samada ka furmay, oo codkii aan markii hore maqalnay ila hadlay, sida buun oo kale , ayaa yiri: " halkan ku soo kacay ., iyo waxaan idinka waxa waajibka ah inay hadda ku tusi doonaa" (oo kala ah, ka dib da'da kiniisadda) MARKAY ayaan waxaan u imid in Ruuxa, oo bal eeg, waxaa jiray carshi taagan samada, iyo mid ka mid ah oo carshiga ku fadhiistay.
Halkan rayrayn Assembly laga bilaabo 1 Tesaloniika 4:16, sida muujinta John helay. cod xoog A, buunka Ilaah iyo rayrayn. isku midka ah A jecel yahay! John uu ruuxa arki kaniisadda kor in ay matalayaan 24 odayaasha carshiga hareerihiisa.
Waxaan hesho a "screanshot" jannada Cutubka 4 iyo 5, kaas oo ah ka dib markii rayrayn, laakiin ka hor inta dhibta dhulka. Laga soo bilaabo cutubka 6 aynu dib on Earth tahay, iyo John arko dhib aragtida indhaha shimbirta ayaa ciyaaray baxay on Earth Cutubka 6-19.
24 oday carshiga hareerihiisa
T reviously ii sheegay in 24 waayeelladii kiniisadda waxaa wakiil ah oo cirka jooga by rayrayn hor fitnada. Waxaan bilaabi karaan in shabahaya macluumaad isku mid ah oo ku saabsan 24 odayaasha iyo ballamada Golaha waa:
Ballan qaaday in ay Southampton
Fadhiga carshiyo (Rev 4: 4.11: 6
Hayso khamiisyo cadcad (Rev. 4: 4)
Crown madaxiisa ku (Rev. 4: 4,10)
Waa boqorradii (Muujintii 5:10
Wadaadada (Rev. 5:10)
Carshiyo (Matayos 19:28, Muujintii 3:21
dharka White (Muujintii 3: 4-5)
Crown (1 sac 9:25, Lane 4: 1,2)
boqorrada doono (Rev 1: 6, 2:26, ​​20: 6)
wadaaddadii doono (Rev 20: 6)
In Muujintii 5: 9, sidaas gabyi 24 odayaasha gabay cusub si Masiix iyo wanka qurbaanka:
aayadda 9 Oo waxay ku gabyeen gabay cusub: "Adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabadihiisa furto, waayo, waxaad la laayay, iyo dhiig leh aad iibsan waayo, Ilaah dadka ka qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo quruun kasta. V.10 Waxaad ka dhigtay iyaga inay boqortooyo iyo wadaaddo Ilaaheenna ahu u noqon, oo waxay boqor buu ahaan doonaa dhulka. "
S marar badan ka hor, waxaa jiray qaladaad in turjumaad ka qoraalka Giriigga ee asalka ah. Waxyaabaha kale, Oo waxay ku salaysan tahay inta badan ee qoraalka Giriigga fasiraya sida this halkii:
aayadda 9 Oo waxay ku gabyeen gabay cusub: "Adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabadihiisa furto, waayo, waxaad la laayay, iyo dhiig leh aad soo iibsatay noo waayo, Ilaah ka qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo quruun kasta. V10 Waxaad naga dhigtay boqortooyo iyo wadaaddo Ilaahayaga, oo aan boqor buu ahaan doonaa dhulka. "
D e 24 oday isu aqoonsadaan Mu'miniinta, oo sidaas daraaddeed waa dadka soo furtay oo dhan ayaa la badbaadiyey by rumaysadkiinna xagga Ciise Masiix dhulka. Waxay yihiin oo cirka ka soo dhibaatadii hore u bilowdo markii ugu horeysay laga bilaabo shaabadda.
Kor ahaa wax qarsoon
1 Korintos 15:51 - Bal eega, waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon, oo dhan hurdo ma yeelan doonaan Waxaan, laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa, daqiiqad, ee bilig bilig ah isha ah, markii buunka ugu dambeeya.
P recis in kaniisadda ahaa qarsoodi ah in lagu soo dajiyey iyada oo loo marayo Paul, sidaas oo kale waa rayrayn, qarsoodi ah oo la nalagu soo dajiyey. Erayga Giriigga ah waxa qarsoon yahay "Mysterion" halkaas oo huvudbetydningen waa "wax waa cusub oo ayaa ka hor inta aan jirin."
Waxaan ka heli jirin häntydningar in ay rayrayn ee Axdiga Hore, iyo waxay ka dhigan tahay in Ciise uusan ku bari rayrayn, laakiin kaliya uu arki karo inay yimaadaan si ay reer binu Israa'iil. Kor ahaa qarsoodiga ah ee soo socota si Paul xambaarsanyahay dheeraad ah muujinta in Ilaah ku Aaminto isaga. Kor ku tilmaamay in 1 Korintos 15 iyo 2Thes labaad
toddobaadka 70aad ee sano
P rofetian of Daniel daboolayaa 70 toddobaad taas oo ah sawir betydningsfull ee waqtiga taariikhi ah iyo nebiyada reer binu Israa'iil, oo si buuxda u waasiciyo ka maxaabiistii Baabuloon laga Masiix labaad ee soo socda sidii Masiixa oo reer binu Israa'iil ah.
Dan 9:24 - Toddobaatan toddobaad baa loo qabtay dadkaaga iyo magaaladaada quduuska ah si loo soo afjaro xad gudub ku ah, xir dembiyadiinna, gudo xadgudubka, aan soo bixin doonaa xaqnimo weligeed sii waaraysa, buuxi aragtida iyo wax sii sheegidda, oo subko kan ugu quduusan.
toddobaadka 70aad iyo final of sano ayaa la Israa'iil iyo dadka Yuhuudda ah si ay u samayn oo aan shirka. In Dan 9:24, waxa aan arki karnaa in dhammaan 70 toddobaad oo sano ayaa la dadka Yuhuudda iyo Yeruusaalem inay sameeyaan. Just sida 69 wiig ee ugu horeeya waxba la shirka u sameeyo haysan sidaas ma leeyahay toddobaadkii ugu dambeeyey ee sano ee la shirka u sameeyo.
Israa'iil iyo dunida
D todobaadkii la soo dhaafay of sano kaas oo sidoo kale waa dhib sida lagu qeexay cutubka Up 6-19, oo waa tallaabo Ilaah la Israa'iil iyo ciidankan. kaniisaddu waa qaybta kaas oo ku taalaa inta u dhaxaysa 69 iyo toddobaadka 70aad ee sano, kaas oo lagu qeexay aayadda 26 - laakiin dhammaadku yimaado sida daadkii ah. Si dhamaadka halkaas ku ahaan doonaan dagaal. burburka waxaa ka go'an.
Ilaah ay barnaamij aan ku dhameysan kartaa la Church iyo reer binu Israa'iil hortooda wuu oofiyey ururada bixinta iyaga la.
da'da Church darafyadiisa
A lltså Ilaah, ka hor inta aynaan u gelin todobaadkii la soo dhaafay of sano, dhamaystirka waxa aynu u qayshanno da'da kiniisadda, taas oo bilaabay maalintii Bentakostiga, waxaana uu sii 2,000 oo sano. Marka Ilaah si wanaagsan ku dhamaaday da'da kaniisadda, Ilaah wadi karaan "barnaamijka la Israa'iil."
Axdigiisii ​​uu la dhigtay reer binu Israa'iil oo keliya la oofin karo in toddobada sano ee u dambeeyey ee Daniel ayaa wax sii sheegidda. Marka ballan qaadyada Ilaah ee Israa'iil aad shuruud la'aan, waa Ilaah kaliya ee u oofiya karo. In Romans cutubka 11, Paul in Ilaah waa in la joojiyo barnaamijka la kiniisadda horteeda inuu sii wadi karo inuu qorshaha la Israa'iil.
Falimaha Rasuullada 15:14 -16 - Simecoon ayaa ku tilmaamay sida Ilaah markii ugu horraysay u xaqiijiyey inay dad uu ku guuleystay waayo, magiciisa ayaa quruumaha (NT-Assembly) ka mid ah. Waa waafaqsan tahay hadalladii nebiyada, oo wuxuu leeyahay, Ka dib markii in ka qabow waan soo noqon doonaa oo dib u dhiska teendhada dhacay Daa'uud.
V arko heshiisiin ah isku xig xiga ee Yacquub. First yimid da'da kiniisadda, ka dibna, wuxuu dhisi doonaa teendhadiisa dhacay Daa'uud.
Dhibaatada waa diyaarinta ah ee reer binu Israa'iil hortooda Millennium. Israa'iil inay awoodaan inay u dhexeeya ka gees ah iyo Masiixa dooran noqon doonaa. Inta lagu guda jiro garsoore dhib ah Ilaaha reer binu Israa'iil, halka ugu Yeedha dadka Yuhuudda boqortooyada Masiixa. cadhada Ilaah Israa'iil oo quruumaha oo isaga iyo toobadda soo dejin doonaa.
Maalinta Rabbiga iyo Ciise Masiix maanta
Halkan aynu eegno Church Axdiga Cusub, iyo gaar ahaan waqtiga rayrayn Assembly ee waa betydning weyn inaynu naqaan farqiga maalinta maanta Rabbiga iyo Ciise Masiix. At malo ugu horeysay, waxay u ekaan karaan sida uu hadalka ku saabsan maalinta, laakiin xaqiiqada ah waa in "laba" maalmood waxaa ka mid ah qof aad u kala duwan oo ay leeyihiin content gebi ahaanba kala duwan ee dhammaadka wakhtiga.
Zeph 1: 14-16 - maalin weyn Rabbigu waa soo dhow dahay, oo u dhow, oo waxay dhaqso doono. Dhegayso, maanta waa maalintii Rabbigu! Markaasaa la qaylinaya geesiyaal walaaca. oo waa maalin ay cadho waa maalintaas, oo waa maalin ay cidhiidhi iyo cidhiidhi, oo waa maalin ay halligaad iyo baabbi'in, oo waa maalin ay jiraan daruuro iyo carceero, maalin dhawaaqa oo geeso iyo dibad qaylo ka dhanka ah murtornen deyrka lahayd ...
2 Tesaloniika 2: 2 - Marka ay timaado in Rabbigeenna Ciise Masiix iyo our lagu isagii u soo ururay, waxaannu idinka baryaynaa, walaalayaalow, in aan si lama filaan ah lumiso booskiisa oo noqday cabsi, oo innaba by ruuxa kasta ama eray ama warqad, sheeganayso in ay Ilaah ha naga fogeeyo iyo in uu ku salaysan yahay ayaa iman maalinta Rabbiga.
N waa maalinta Rabbigu u haddii ay tahay, cadhada iyo domstid in soo bixi doonaa inuu dhulka u taliyo in waqtiga u dhaxaysa rayrayn (bilowga dhibaatadii) iyo Millennium. maanta Ciise Masiix laguma sheegin Axdiga Hore, sida ay leedahay la qarsoon dhab ah in la sameeyo, kuwaas oo, runta ah ee kaniisadda Axdiga Cusub, iyo rayrayn ammaanta.
Ciise Masiix maanta waa kaliya dajinta NT a. Maalinta Rabbiga ma ahan oo kaliya dajinta Axdiga Hore ah, laakiin dommens waqti quruumaha waa faahfaahsan oo dheeraad ah ee Axdiga Cusub, oo gaar ahaan lagu tilmaamay in cutubyada Revelation 6-19. "Maalinta Rabbiga" dhulka iyo dadka dhulka halka maanta Ciise Masiix ku saabsan rayrayn Assembly NT iyo diyaarinta Aabbaha jannada ku jira hortiisa ku saabsan.
Marka ay timaado in Ciise Masiix maanta, waa benämnelse a on maalintii Ciise iman doonaa daruuraha si aad u hesho uu shirka buuxda ayuu naftiisa u.
Filiboy 1: 6 - waan hubaa in kan shuqul wanaagsan bilaabay aad ee sidoo kale waa in ay buuxiyaan ilaa maalinta Ciise Masiix ahay.
B etydningen aayaddan waa in Ruuxa Quduuska ah maalintii Bentakostiga uu shaqada bilaabay by xulashada ah dadka jannada, si buuxda u qaadan doonaa oo waxaan ka dhigi dadkan xoog ka buuxaan soo socota si ay Ciise Masiix maanta, in soo socda Ciise inuu guriga keeno uu shirka in ay jannada ku Guryo - oo sidaas qaadataa meel ka hor maalinta Rabbiga.
Kaniisadda ee Tesaloniika
2 Tesaloniika 2: 1-12 - Kaniisadda ee Tesaloniika waxa uu noqday cabsi by macallimiin been ah kuwaas oo lagu barayay in maalinta Rabbiga, oo leh dhan in waxa uu tusinayaa xanaaq iyo dhib mar hore bilaabay. Waxaa xitaa u eg qof si Paul diray warqado been abuur ah iyo siiyey isaga qudhiisa, in la siiyo warqad awoodda. Paul si weyn uga digaysa this waxbarista beenta ah, oo uu bilaabo inuu baro runta ku saabsan this "maalinta Rabbiga".
First, Paul in 1 Tesaloniika 1:10 yaboohay shirkii in Ciise badbaadin lahaa cadhada imanaysa, sababta waxay ahayd walwal aad u badan oo ka sii weyn marka ay si lama filaan ah u maleeyay in ay ahaayeen dhexe waxaa ka mid ah. Paul suura iyaga iyo gudbiyaa shirka in Maalintii Rabbiga ma bilaabi karaan ninka dembiga ka hor, in ka gees ah ayaa marka hore soo baxay, oo ku nuuxnuuxsaday, in this inaan la samayn karaa ka hor ee "haya dib" ayaa marka hore la tirtiray jidka ayaa looga tuuraa. (Saarista First), turjumaad Danish)
Yaa ama waxa dib u celineyso?
V W oodna 4-8 siidayn ka gees ah, oo mid ka mid ah daafaca bal yaa isaga u haya ayuu si aan hore u iman karin. Maanta, waxaynu u qori 2013, oo waxaannu ku tirinnaa karaa in ay / uu haysta dib weli halkan waa marka ka gees ah ayaa weli weeraryahanka ma iman. Maxaa keena inay mar kale noqdo labada tilmaamay "waxa" iyo "uu". Ruuxa hadal Ruuxa Quduuska ah waa erayga "pneuma" ee Giriigga. Waxaa jira eray intetkön.
Xaqiiqada ah in Ruuxa Quduuska ah waqti isku mid ah waa Ilaah, waxa uu sidoo kale tilmaamay "ayuu". Waxaa jiray male badan oo ku saabsan waxa uu dib u celineyso ka gees ah, laakiin in labada waa aan lab iyo dhedig ahayn halka rag ah waxay noqon kartaa ma jirto oo aan ka ahayn Ruuxa Quduuska ah. Ruuxa Quduuska ah ula xiriir la kiniisadda, ayaa tan iyo maalintii Bentekoste in 2aad Acts In GT sidoo kale u muuqday Ruuxa Quduuska ah dhulka, laakiin halkii ay ka soo top ah. Sida uu samayn doonaa in fitnada.
D Ruuxa Quduuska ah ku yimaado dhib ay sii wadi doonto in ay ka hawlgalaan aadanaha laakiin ka uppryckelsens daqiiqad ka kor ku xusan. Sidaas daraaddeed waxaannu ma arkaan Ruuxa Quduuska ah wakiil Cutubka 3 of Revelation buugga. In xarfaha toddobada kiniisadood, annana waannu ku maqli erayadan: Kan dhego, ha maqlo waxa Ruuxu ku leeyahay in shirka. Ka dib markii Cutubka 3aad, taas oo rayrayn Assembly ee ma aha Ruuxa Quduuska ah ku hadla. Muujintii 13: 9 - Kan dhego, ha maqlo . Mana ah Ruuxa Quduuska ah in yimaado badbaado kala duwan oo fariin Xukunkiisa qoomka in fitnada, waxaa la samayn doonaa Malaa'igta. ( Rev 14: 6-7 ).
Marka Golaha noqdo qabtay Ruuxa Quduuska ah oon haysanin meel ay ka shaqeeyaan ka dibna Golaha yahay macbudka oo kaliya in Ilaah jooga maanta wuxuu ogyahay leeyahay. (1 3:16). kaniisadda kaliya ee ka wakiil yahay in dhibta waa skökoförsamlingen, iyo Ruuxa Quduuska ah ma shaqeeyaan ka.
Qashinka ama ka tagay?
2 Tesaloniika 2: 3 - ..Ty ugu horeysay, qashinka waa inay yimaadaan oo ninkii sharci, wiilka halaagga, si furan u soo baxaan
D erayga et Giriigga loogu tarjumay qashinka, erayga "apostasia". magac "apostasia" wuxuu ka yimid falka "afistemi" kuwaas oo huvudbetydning waa "dhaqaaqin" ama "in ay wax ka mid ah meel kale u guuraan." ereyga waxaa loo isticmaalaa si gaar ah oo xidhiidh la leh dhaqaaqaan kasta oo ka mid ah meel kale, ama haddii ay iska tagaa ama waa qof oo kala duwan.
Eraygii waa la isticmaali karaa oo xidhiidh la leh seduction diimeed ama qashinka in lagu tilmaamay in 1 Tim 4: 1. Qaar ka mid ah turjumaanada horeysay Protestant Bible doortay inuu turjumo erayga "tagay" ayuu Ingiriisi, taas oo macnaheedu yahay in ay tagaan ama baaba'aan.
Qaar ka mid ah turjumaan Bible ka badan si fiican u yaqaan kuwaas oo loo tarjumay erayada baaba'aan / tag ka mid ah Kenneth Wuest, Genovabibelen, John Dawson, Coverdale, Crammer iwm Ma rabtaa inaad jeceshahay turjumaan erayga "tagay" loo isticmaalo halkii qashinka iska cad siin lahaa Hufnaan weyn ee la xiriirta ku rayrayn iyo dhib. Waxa kale oo doonayay in la siiyo dareen badan oo dheeraad ah ee la xiriira fahamka ee teksten labada 1 Tesaloniika iyo 2 Tesaloniika.
Golaha sooma ay geli doonaan dhib ama cadhadii Ilaah ayaa ku xanuunsado
Illaa 6: 16-17 - oo waxay ku yidhaahdeen buurihii iyo dhagaxyadii, "Nagu soo dhaca oo naga wejigiisa carshiga ku fadhiya iyo cadhada Wanka qarin. Waayo, cadhadiisu maalin weyn ayaa yimid, iyo kuwa istaagi kara?
Rev 15: 1 - Oo haddana waxaan arkay calaamo kale oo weyn oo cajaa'ib leh samada, toddoba malaa'igood oo haysta toddoba belaayo, ee la soo dhaafay, waayo, waxaa iyaga ku dhex cadhadii Ilaah ayaa ku gaadho in ay fulinta.
V yidhi dadaalka waa isku mid sida Maalintii Rabbiga, taas oo la mid ah sida cadhada Ilaah. Dhibaatada oo dhan waa cadhada Ilaah, iyo ma ahan oo keliya qaybtii ugu dambaysay ee den.Vi arki kartaa in mar hore at 6 seal sidaas ayaa cadhada Wanka iman. In Cutubka 15, waxaan arki in Cadhada Eebe la doono dhameystirtay la toddobadii belaayo ee ugu dambeeyey. Waxaa loola jeedaa in Cadhada Eebe ma laha inuu ku soo bilowdo oo haysta toddoba belaayo, laakiin hore bilaaban doono.
Iyada oo toddobadii belaayo ee ugu dambeeyey dhammaado dhib iyo cadhada Ilaah. In dadka Tesaloniika 1: 9-10 aynu ku ballan qaaday in ay sugi Ciise samada (rayrayn) ka, isla ayaa naga samatabbixiyey cadhada imanaysa.
1 Tesaloniika 1: 9-10 - iyo sugtaan Wiilkiisa uu ka yimid xagga jannada, kuwii dhintay ka soo Ilaah ka sara kiciyey, Ciise ayaa naga samatabbixiyey cadhada imanaysa.
1 Tesaloniika 5: 1-9 - aayadda 2 Waxaad og tihiin si aad u wanaagsan in maalinta Rabbigu (cadho / dhib) waxay u iman doontaa sida tuug habeen ah. V.9 - Waayo, Ilaah ma na doorataan xanuunsado cadho, laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix.
D mid qaybta aan hadda uun ka akhrisan waa mid aad u xiiso badan. 1 Tesaloniika 4:13 cutubka wixii ka dambeeyey waxay ku saabsan tahay rayrayn Assembly oo kulan ku leh Ciise in meel bannaan oo. Paul geliya dib rayrayn ee la xiriirta dhibaatadii in lagu tilmaami doonaa Cutubka 5: 1-3.
Waxa uu u dhaco si ay u sharxaan maalintaas, in Maalintii Rabbiga ha noo yaabin karaa sida tuug oo kale, sababtoo ah waxaan iska leh ay iftiinka. Waxa uu u dhan dhamaado by xaqiijinaya in ay tahay dhibta uu baray, waxaana ay hubisaa in aanan madaafiic cadho, laakiin badbaadada Ciise.
F qaybta Philadelphia, oo wakiil ka ah mid ka mid ah laba kaniisadood dhammaadka wakhtiga loo yaboohay in lagu hayo saacadda jirrabaadda, taas oo dunida oo dhan ku soo noqon doonaan. yabooha Tani waa mid ka mid ah ballamihii ugu adag in kiniisadda la kor doonaa qabtay todobaadkii la soo dhaafay of sano.
Muujintii 3:10 - Waayo, waxaad hadalkayga xajiyeen ku saabsan dulqaadasho, waxaan kaa dhawri doonaa, wuuna idin badbaadin saacadda jirrabaadda, taas oo dunida oo dhan iman doonaan, oo dadka ay imtixaanka keenaan .
Erayga Giriigga ah ee Dhawrista erayga Giriigga ah (si rikoor). falka waxa loo adeegsaday labo jeer aayaddan. Marka ugu horaysa waxa loo tarjumi doonaa ilaalinteedu , laakiin mar labaad si uu idiin badbaadiyo ka turjumaad af Iswiidhish. In KJV waa labada erayada tarjumay Dhawrista siinayo betydning gebi ahaanba kala duwan:
10 Maxaa yeelay, adigu eraygii aad dulqaadatay xajin, Oo weliba waxaan kugu saacadda jirrabaadda, Kuwaasoo dunida oo dhan inay ka iman doonaa dhawri doonaa, si loo tijaabiyo Taasi dhulka deggan. (King James Version)
Thayer ku dooday in marka eraygan loo adeegsaday erayga Giriigga ah ee "mid ka mid ah", waxay ka dhigan tahay in ay "taagan in wax keliya," laakiin marka la isticmaalo "geedkii" waxaa loola jeedaa sida tarjumaadda King James ayaa "ka dhawray". Sidoo kale, "geedkii" loo isticmaalo marka lagu turjumay in 1 Tesaloniika 1:10 - .. kuwaas oo ayaa naga samatabbixiyey ka cadhada imanaysa. John rabay si ay u muujiyaan in ay ahayd "saacadda jirrabaadda," ayuu ku qoray, "dhillo shaah ah". Halkii doorato John si ay u qoraan "ek iya horas" taas oo kaliya waxaa loola jeedaa " ka saac ee maxkamadda"
Waayo, kanu waa mid Dhibaatada?
Muujintii 3:10 - saacad jirrabaadda, taas oo dunida oo dhan iman doonaan, oo dadka ay imtixaanka keenaan .
A saac ee TT maxkamadda waa hadal ah oo cadhada Ilaah iyo waxa iman doona qiimaha, ugu heshiiyaan. Laakiin sababta ay u doono? Ma in ay isku dayaan oo nadiif ah shirka? No, waa in dadka deggan saaray, caalamka oo dhan, si ay imtixaanka. Waxaa loogu talagalay dadka ku hadhay dhulka ka dib markii rayrayn, iyo ku soo biiray ka gees ah.
Erayga "dadka deggan" (katoikeo), oo waxaa halkan loogu isticmaalayaa waa erey xoog leh. Kanu waa eraygii ku saabsan wax waarta oo joogto ah. Taas macnaheedu waa xukunka in kuwa dhulka dhigay in ay guriga run, iyo tilmaamaysaa la Ganacsiga Dhulka iyo diinta. Dhulka ay guriga joogto ah, taas oo aan suurto gal gudbin karaan Golaha waxay ka sameeyeen.
Church ah oo runta ka kooban yahay qariib iyo dad sodcaal dhulka this. (1 Butros 2:11), oo doonaya ugu sarreeya (Col 3: 1-2) isagoo ay dhalasho samada (Efe 2:19), oo ay guriga oo cirka jooga (John 14: 2) .
Kuwaas oo aan sugayaan?
Ninba 2:13 - Inkasta oo aan ku sugnaa rajada barakaysan ee Ilaaheenna weyn oo ah Fräsare Ciise Masiix ka soo muuqan doona wakhtigii ammaantiisa.
D t aan shaki ku jirin in filasho iyo farxad waa Ciise socda. Waa in aynaan sugin, ka gees ah dhib iyo cadhada Ilaah. Haddii Rabbigu lahaa ku hay in dadka uu socdeen iyada oo dhib iyo guriga ka gees ah, wuxuu sidoo kale uga digay, oo waxay diyaarsaday shirka. Maxaa yeelay, haddii ay dhacdo in, ka gees ah si ay u soo baxaan ka hor inta rayrayn dhici karto.
injiilka boqortooyadii ku
D et Nor waa injiilkii nimcadii in lagu wacdiyi doonaa inuu dhib, laakiin halkii ay injiilka boqortooyada. injiilkan lagu wacdiyo by 144,000 doortay Yuhuudda naadinayaa dib u soo celinta Masiixa ee boqortooyada Masiixa. Injiilka nimcada sida aynu ognahay waxaa lagu dhamayn doonaa in da'da kaniisadda in la dhammeeyo.
Shuhadada ayaa sidoo kale Ilaah idiin baryaynaa inay ka aarsadaan cadaawayaashooda. Tani waxay sidoo kale waa maraggii rumaystaha ee kalfadhiga Golaha ma. Ma Ilaah weydiiso si ay ugu aargudaan cadaawayaasheenna, aynu Ilaah weydiisano inuu badbaadiyo dadka oo dhan. (Romans 12:19) The laba markhaati sidoo kale ka heli awood u leeyahay inuu isu aar gudan oo cadaabana cadaawayaashooda.
F örsamlingens rayrayn jiray si qarsoodi ah ee soo socota si Paul helay gudbin Golaha. Sidaa darteed, waxaan ma maqlin Ciise baro oo ku saabsan rayrayn. Ciise wacdiyo wakhtiga sarakicidda ee maalinta u dambaysa, oo ay la arki karo u yimid inuu Israa'iil.
Dan 9 cad u muujinaysaa in 70 toddobaadka of sano waa reer binu Israa'iil oo Yeruusaalem ma aha shirka.
By barnaamijka Ilaah khaldaan ee Israa'iil iyo Church waxay noqon doontaa khalad. Iyada oo Qorniinka badan, Rabbigu nagu ballan qaaday in kaniisadda cadho scalable ma aha, laakiin si ay u badbaadaan ka. Cadho ama maalinta Rabbigu waa muddada dhan toddoba sano. sidaas daraaddeed Golaha The kor doonaan ka hor inta todobaadkii la soo dhaafay of sano bilaabmaa. Sida shirka Filadelfia lagu hayn lahaa saacadda jirrabaadda.
Ka dib markii Cutubka 3 ka mid ah kitaabka Muujintii, si aynaan mar dambe u hesho shirka cutubyada 6-19 kaas oo sidoo kale waa dhib toddoba sannadood. Waxaan eegi mana Ruuxa Quduuska ah, taas oo la xidhiidh dhow kiniisadda. Marka Ruuxa Quduuska ah oo deggan badbaadiyey waxaa dhulka ka soo baxeen, waa lacag la'aan ah ka gees ah iyo reerkiisa. Kaniisadda oo kaliya in la soo celiyo waa ka dhillowday.
Waxaan ka heli wax caddeyn ah in Goluhu waa iyada oo dhibaatadii, laakiin on lid ku ah, in la sii hayo ka. Waxaan Shell sugaya in ay Ciise Masiix maanta ku nool yihiin ee qalbigayaga. Dhibaatada ama dhibkii dadka Yacquub waa kuwa dhulka deggan. Israa'iil iyo Yuhuuddii la isku dayay doonaa si gaar ah haddii ay doonayaan in la aqoonsado in Ciise yahay Masiixa ama ma. Ka gees ah in uu waqti rugta Ilaah oo sidoo kale ah kalaab. kaniisadda waxaa wakiil ka ah oo cirka jooga xitaa bilowgii dhibaatadii by 24 oday. Marka Rabbiga ku noqdaa dhulkiisii ​​Muujintii 20 sida Golaha, si wadajir ah ula Malaa'igta.
D et tani waa in la sii wado post ugu horeysay "laabashada Ciise ka hor fitnada," oo sidaas oo kale waa difaaca u-tribläran Pre taas oo macnaheedu yahay in rayrayn ee Mu'miniinta ah dhacdaa ka hor inta fitnada. Waxaan ka heli badan xaq xal ee Axdiga Hore ah in yihiin dad lagu daydo in rayrayn, dhib iyo jeer aannu ku dhex nool. Waxaan doonayaa in aan tuso qaar ka mid ah xaq xal ka GT ka arki kartaa oo xaqiijin rayrayn ka hor fitnada.
N hadlayo wax la xidhiidha dhibaatada waa in aan bilaabi by kala dhibaatada guud ee aan la kulmaan dunida (gr.thlipsis) iyo dhibaato aan la kulmi in dhibaatadii weynayd (gr.Thlipsis megas) in Ciise wuxuu ka hadlayaa in Matthew 24, iyo Daniel Cutubka 12. adduun rumaystayaasha dhabta ah la kulmi doonaan loollan xagga ruuxa ah ka dhanka ah madaxda iyo kuwa amarka, xagga jidhka iyaga u gaar ah, iyo dhibaatada injiilka. noocaas ah ee silica, Ciise marnaba noo ballan-qaaday in aan xor ka noqon doonaan. cadho aan la kulmaan in dhibaatadii waa wax kala duwan iyo wax aan ereyga ayaa noo ballan-qaaday in aan u baahan tahay ma la kulmaan ama dhex mari.
In times dhawaan ka badan ayaa cadhada Ilaah ayaa bilaabay in ay leeyihiin dadka betydningar kala duwan. Waxaa sheegaye cadhada Wanka, Man cadho, cadho Shaydaanku iyo cadhada Ilaah iyo waxa ay jahwareerineysaa. Sidoo kale waxaa jira khilaaf labada goorta iyo sida ay cadhada Ilaah ugu dhacdaa.
In Muujintii, waxa aan arki karnaa in dhibaatadu bilaabo cutubka 6 ka mid ah lixdii shaabadood horeysay jebiyey Wanka iyo dhammaanaysaa Ilaah toddobadii fijaan oo cadhada cutubka 16-18. Horeba lixda shaabadood ugu horeysay, waxaan arki saameyn ba'an ku nolosha on Earth. Lixda shaabadood marka hore keeno dagaalka, iyo abaar, belaayo iyo sababaha dhimashada rubuc ka mid ah dadka dunida ee. In si kale loo dhigo, oo ku saabsan 1.7 bilyan oo qof ayaa u dhinta doonaa inta lagu guda jiro lixda shaabadood ugu horeysay. Garab this waxaa jiri doona Shuhadada dadka ka rumeeyaan inta lagu guda jiro fitnada.
Waxaa dhacay markii malaa'igihii daheysha in toddobadii buun sidaa daraadeed waxa ku kicin kara si toos dambiyo cusub oo ah dembiyada dhulka. garsoorayaasha Kuwani isku daraa masiibooyinka dabiiciga ah xoog badan ka sarraysa belaayo. Marka toddobada buun haystay waxay diyaar u yihiin la xanuunkoodii sidaas oo saddexaad oo biyo ah ka baabbi'iyeen, saddex meelood meel dhammaan nolosha badda ku dhinteen, iyo kan saddexaad oo ka mid ah dhulka kor baa lagu gubi doonaa, oo saddex meelood meel dadka ka badbaaday lixda ugu horeeya shaabadihiisa dhiman doonaa. In si kale loo dhigo, oo dheeraad ah ku dhowaad 1.7 bilyan oo qof oo ah dadka dunida ku.
fijaan Cadho dhameystiraya dhamaadka xukunka Ilaah
V ee uu leeyahay hadalka ma ku saabsan sida badan dadka loo ogolaan doonaa inuu soo nooleeyo wixii cadhadii suxuunta keeno, laakiin waxaan u malayn karaa oo keliya. Ciise qudhiisa u sheegay in haddii muddada waa la soo gaabiyey, ma dad ah si ay u badbaadaan (Matayos 24:22). cadho Kuwanu waa out of decription oo dhan, oo way adag tahay in la fahmo cawaaqib ama betydningen iyaga ka mid ah.
fijaan oo cadhada Kuwani noqonayaa dhammaystirka ugu dambaysta xukunka Ilaah. Rev 16: 16-21 wuxuu ka hadlayaa sida dhulgariir weyn in ay jirto abid marnaba wax sidaas oo kale ka hor inta. cidhibtii waxaa ka mid ah waan yeeli doonaa, oo dhan tihidin kuwa gasiiradaha, iyo buuraha mar dambe siima jiri doonto. I rumaysta marka waxaan idinku leeyahay, cidina ma doonayso in ay dhulka wakhtigaas.
Dhibaatada ka yar yahay cadhada imanaysa
M n kale haddii loo dhigo, waa muddo dhib markii ay cadhada Ilaah la muujiyey iyo shubmay, oo dhulka oo dhan u taliya. cadhadiisu ma aha maalintii sahlan, sida Maalintii Rabbiga ma aha waxa ay sidoo kale. cadhada Ilaah, cadhada, Maalintii Rabbiga, cadho iyo wixii la mid ah. waa muddo dheer oo ka bilaabma shaabadda koowaad waxaa la jebiyey, iyo culminates Ciise arki karo inay yimaadaan si ay reer binu Israa'iil iyo dunida oo dhan, halkaas oo cadhada Ilaah ayaa sidoo kale waxaa la muujin doonaa.
Paul cadeeyay in Goluhu ma noqon doono dhulka lagu guda jiro waqti this ee xukunka soo gabagabeeyay in dhibaatadu ay tahay. In 1 Tesaloniika 1:10 Paul ku hadla si Rabbigu nagu cadhada badbaadin doonaa inay yimaadaan. Eraygii ka qoraalka aasaasiga ah waxay ka dhigan tahay iyadoo la tixgelinayo waqtiga iyo meesha labada, si aan si kale loo dhigo, ma joogi doonaan markay dhacaan. Waayo, Ilaah ma na doorataan xanuunsado cadho, laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix.
Ilaah cadhadiisiina way soconaysaa dhib oo dhan
N waxa ay ku saabsan cadhada Ilaah inta badan farta dadka si ay u la mid ah sida dhibaatadii weynayd ma aha, oo ay gabi ahaanba xaq yihiin. dhibaatadii weynayd waa 3.5 sano laga bilaabo waxa baas oo hallaynta iyo cadhada Ilaah ama cadhada socdaa dhib Oo toddoba sannadood oo dhan.
Illaa 6: 16-17 - "Nagu soo dhaca oo naga wejigiisa carshiga ku fadhiya iyo cadhada Wanka qarin. Waayo, cadhadiisu maalin weyn ayaa yimid, iyo kuwa istaagi kara?
Rev 15: 1 - Oo haddana waxaan arkay calaamo kale oo weyn oo cajaa'ib leh samada, toddoba belaayo, ee la soo dhaafay, waayo, waxaa iyaga ku dhex cadhadii Ilaah ayaa ku gaadho in ay fulinta.
Halkan waxaan ku aragnaa in xataa shaabaddii lixaad sidaas ayaa cadhada Wanka yimaadaan, taas oo la mid ah sida cadhada Ilaah, marka Wanka iyo aabuhu waa isla qofkii. Inta badan, sida la tilmaamay in toddobadii belaayo ee ugu dambeeyey - kaasoo ay sidoo kale cadhada Ilaah waa cadhada Ilaah. Laakiin sida ku sugan cutubka 15: 1 waxaan ka arki karnaa in ay cadhada Ilaah ugu gaadho ay ku dhammaystirmaysaa kuwaas oo belaayo ee ugu dambeeyey la, aan waa bilowgii. Sidaas darteed waa uun markuu dhammaado xilliga cadhada Ilaah dhamaanayey toddobadii belaayo ee ugu dambeeyey.
Badbaadi waqtiga iyo meesha ka
A Braham Rabbiga waaniyey wax xuja ah oo ku saabsan Sodom iyo Gomora noqon lahaa lid ku ah uu dabeecadda xaqa ah ku baabbi'iyo oo ay la socdaan kuwa sharka leh (1 Baxniintii 18:23) ah.
Peter wuxuu na barayaa adiga oo na siinaya tusaale ahaan reer Luud oo ahaa si ay u muujiyaan in Luud ma ahayn tusaale ahaan ku meel gaar ah, laakiin mabda 'guud ka dhanka Ilaah, in Rabbiga "badbaadiyay xaqa ah ka mid ah jirrabaadda" Tarjamada Afka: Rabbigu waa garanayaa sida loo badbaadin cibaado leh laakiin ka tijaabooyin ". Word From (baxay) micnaheedu waa waqtiga iyo goobta dhacdadan.
Digniinaha in Kaniisadda
F Ragan waa in aan ka heli karo erayadii Rabbiga ku hadla raaxada ama digniin uu aroosadda wajahay cadhada imanaysa? Miyaynu heli karaynaa erayada oo uu ballan qaaday in la ilaaliyo iyo nolosha noogu daayo iyada oo waqti laga cabsado this dhib yahay? waxaan suurto gal arki karin jiritaanka Golaha inta lagu guda jiro fitnada?
No, aan lama helo! Just, sababtoo ah wuxuu hänvänder in Israa'iil markii shirkii ka dhammaatay, oo haysan kartaa barnaamijka ay la Israa'iil intii lagu jiray todobaadkii la soo dhaafay of sano, halka uu naga ballan qaaday in aynaan is saameeyeen cadhada imanaysa.
Sida wakhtigii Nuux
Mat 24:37 - Waayo, sida wakhtigii Nuux ahaa, sidaas oo kale ayuu Wiilka Aadanahu soo socda doonaan.
H Erren noo doonayo inuu wax ka barato Nuux iyo is-barbar marinka ee joojinta. In Mat 24:37 waxaan ka akhrisan in si la mid ah sida ay ahayd in wakhtigii Nuux ahaa waxa ay noqon doontaa soo Rabbiga ku noolaa. Waxa aynu ka baran karaa laga bilaabo maalinta Nuux wuxuu ku saabsan yahay waqti ka hor Flood, wabtay oo gacanta ilaalinta Rabbiga u taliya Nuux iyo qoyskiisa.
Ciise sii si ay u sharxaan in dadka badbaadaan dhibta si degdeg ah lagu xukumi doonaa ka hor inta boqortooyada 1000 sanadka. Qaar ka mid ah la kor xukumi doonaa oo loo ogol yahay in ay geli doona boqortooyada Masiixa. In si la mid ah sida in daadka, dadka la kor xukumi doonaa. Dadka reer maalintii Nuux tegey under maxaa yeelay, daadka, iyo si la mid ah, dadka u lumi doontaan fitnada, iyo straks ka dib markii xisaabta Ciise.
Saddex nooc oo dadka
D et ahaayeen saddex nooc oo kala duwan oo dad ah kuwaas oo ku noolaa in wakhtigii Nuux ahaa ka hor inta daadkii yimid. Waxay ahayd kuwii gaaloobay kuwa diidday Eraygii Rabbiga, oo dhan ku halligmeen daadka. Waxa uu ahaa Nuux iyo qoyskiisa oo la wada ilaaliyo, iyada oo loo marayo daad, oo ay ahayd Enoch kii loo qabtay ku yidhi Rabbiga hortiisa daadkii yimid. Mid kasta oo hab iyaga u gaar ah u matalaan dadka saddex qaybood oo kala duwan in aanu is barbardhigi kartaa in waqtigeena maanta. In kaliya si la mid ah waxaan arki saddex nooc oo dadka maalintii marka aynu u socdaan jihada fitnada iyo soo afjaridda time:
· Dadka ku halligmeen daadkii wakhtigii Nuux ka dhigan kuwii gaaloobay, kuwaas oo aan qaaday in Ciise sida ay badbaadiye. dadka tegi doonaa fitnada, oo loo soo bandhigin cadhada Ilaah. Kuwa aan toobad Dhibaatada lagu xukumi doono Ciise, ka dibna waxaa lagu tuuri doonaa baddii ololaya oo dab.
· Nuux wakiil ka hadhay reer binu Israa'iil oo Rabbiga buuxi doonaa nidarradaydii ay la 1000-sano Reich ah. Nuux waxaa sidaas la doortay reer binu Israa'iil, oo si gaar ah la ilaalin doonaa inta lagu guda jiro fitnada. 3.5 sano galay Dhibaatada Mu'miniinta doonaa Yuhuudda in ay ka cararaan cidla ah meeshii Rabbigu wuu dhawri doonaa, waayo, ka gees ah iyo cadaadis. Nuux waxaa la ilaashaa daadkii oo waxaa sidoo kale qayb ka mid ah dadka Yuhuudda ah in ay noqon doonaan.
· Enoch waa sawir ah shirka oo aan qayb ka mid ah Flood iyo xukunka Ilaah ahaayeen markii uu uu qabtay iyo qaaday by Ilaah hortiisa daadkii yimid.
Enoch / Enoch waa nooc ka mid ah Golaha
1 Bilowgii 5:24 - Enoogna in sidan la socday Ilaah, isagu kuma uu jirin, waayo, Ilaah baa qaatay isagii.
H Änok waa mid aad u hadlay model of rayrayn Assembly oo ay kasoo horjeeddo waqtigii dhibta anti-Christian. Enoogna wuxuu jiray marxaladda 7-dii ka Adam, iyo ku noolaa waqti aad u gaarka ah, kuwaas oo in muddo ah ka daadka hortiisa. Word ayaa sheegay in waqti in si sharkiisu nin ku badan yahay dhulka, iyo quluubta iyo sababaha dadka waxay ahaayeen shar gebi had iyo goorba.
In ku dhex this hubbub aadanaha dembiga badan ee, waxaa jiray nin, Enoch, rumeeyey Eebe iyo isaga oo la socday. (1MOS 5:24) maragga The Enoog waa in uu helay nimcada Ilaah. (Cibraaniyada 11: 5)
waxaa Enoch kor loogu qaaday
Cibraaniyada 11: 5 - By Enoog rumaysad baa lagu sii qaaday oo aan soo food dhimasho . Oo waxay arkeen ma aanan helin, maxaa yeelay, Ilaah isagii qaaday ayuu naftiisa u .
H Änok lagu qabtay iyada oo dhadhankiisu dhimasho waayo, Rabbigu wuxuu isagii qaaday ayuu naftiisa u. In waqtiga ka hor inta uusan rayrayn sida Xanoog naadiyey, oo ka mid ah dadka uu waqti, oo ku saabsan dhibtani soo socda iyo ciqaabta dembiga iyo godlessness. Markii goolka dembi ayaa sidoo kale gaadhay yimid xukunka Ilaah on dembiga maalintii Nuux kolkaasuu u cid diray daadkii, laakiin markaas waxaa Enoch horeba kor loogu qaaday xagga Rabbiga.
Flood waa sawir oo cadhada Ilaah ku jirto dhulka ku soo dayn doonaa, oo dadka sharka leh ee jeer dhamaadka - cadhada imanaysa (1 Tesaloniika 1:10)
Gaadiid oo meel kale
D et erayga Giriigga ah ee "isagii qaaday isaga qudhiisa in" waa metatithemi, iyo waa in KVJ tarjumay "transportet", ie soo wareejiyo, gaadiid oo meel kale. Enoog jiray si kale loo dhigo, gaadiid ama guurtay samada, waayo, isagu sinaba dhimasho uma dhadhamin doono. 1 Korintos 15 aad sheegayaa in qof kasta oo aan Isagu waa hurdaa, laakiin oo dhan waxa loo badali doonaa. Waa Paul kaasoo sharaxayaa rayrayn, ehelkeedu waa meesha qof kasta oo aan wajihi doonaan dhimasho, laakiin waayo-aragnimo in Rabbigu nagu qaadato in uu guriga.
Sida Enoch ka dhigan rayrayn Assembly hor fitnada, oo wakiil ka ah Nuux iyo qoyskiisa, ayay ku ballanqaaday in ka hadhay reer binu Israa'iil, oo waxaa loo kaydin doonaan iyada oo dhibta, oo ay dareemaan barakooyinka boqortooyada Masiixa.
bloodline toddobaad ka Adam
D et in laga yaabaa xiiso leh in aan halkan ku xuso waa in Enoog jiray bloodline toddobaad ka Adam. Golaha yahay si la mid ah Golaha toddobaad ee la ciyaaray Revelation cutubka saddexaad
Waxaan ku noolnahay waqti La'odikiya, oo, ku salaysan ee taariikhiga ah iyo jadwalka-sheegid, waayo, ehelkeedu waa sidoo kale waa marinka ugu dambeeyey ee Golaha ka hor rayrayn. Waxa kale oo aanu ku noolaan bilowgii sannadihii sjutusende ka dib markii abuuridda, halkaas oo Enoogna waxaa kor loogu qaaday sidii toddobaadna släktsled ka dib Adam.
R Axdigii Hore ka magaca Enoch la micno tahay tababarka iyo waxbarashada, taas oo ka dhigaysa noo qabaa Ciise howlgalka amarka in shirka. - " Haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhigi" (Matayos 28:19 )
Sida laga soo xigtay xeerkii Hebrew, sida waa Enoogna waxaa u dhashay on maalintii Bentekoste, kaas oo sidoo kale waa maalintii shirka uu ku dhashay. Hanoks nolosha iyo daadka hortiisa rayrayn waa tusaale cad of rayrayn shirka.
Luudna wuxuu ku badbaadi cadhada Ilaah ka baxsan
1 Baxniintii 19:22 - "Waxaan inaanan rogi doonin magaalada aad ku hadasho ee. Laakiin si ay u degdegay oo halkaas u baxso, waayo, waxba ma aan samayn karo ilaa aad halkaas "
G UD maqlay Qaylada Sodom iyo Gomora, oo wuxuu arkay dembiga daran xukumi jiray magaalooyinka. Ibraahim waxaa ku gorgortami Rabbiga la si aan Halaaga Magaalo ahaayeen kuwo ku hoos toban xaqa magaalooyinka. Haddaba ma waxaa jiray toban xaqa magaalooyinka laakiin kaliya fudud - Luudh.
In kasta oo, in aanay ahayn wax Rabbiga uu u dhiibay, isagu ma uu baabbi'in iyo xukumi magaalooyinka sababtoo ah isaga mid ka mid ah ka mid ah. Sodom iyo Gomora waxaa la soo dersay xukun iyo cadhada Ilaah, oo weliba Ilaah ha ayay dab iyo baaruud roob magaalooyinka badan. Laakiinse Rabbigu wuxuu u cadhoon ma bilaaban karo ilaa Luud in ay magaalada ka tageen oo waxay ahaayeen ammaan ee magaalada dariska ah ee Socar.
Luke 17: 28-29 - In si la mid ah waxa ay ahayd in maalmihii Luud: waxay cuni jireen oo cabbi, waxay iibsan jireen oo iibin jireen, oo beeran, laakiin maalintii Luud ka baxay Sodom ayay dab iyo baaruud cirka kaga soo daateen oo wada baabbi'isay dhan oo iyaga ka mid.
L Axdigii Hore waxaa loo qaaday waqtiga iyo meesha xukunka Ilaah uu noqon lahaa xanuun ka. The malaa'igood oo loo diray si ay u badbaadiyaan Luud ka naadiyaan si ayan u bilaabi kartaa xukunka Ilaah uu ka hor Luud ahaa ammaan. Luudh waa sawir ah shirka oo la soo badbaadiyay oo ka waqtiga iyo meesha of cadhada imanaysa.
2 Butros 2: 7-9 - Laakiin wuxuu ku badbaadiyey xaqa Luud, oo ahaa lahu derdereen nolosha kuwa sharka dissolute.
P etrus baro oo ku saabsan xukunka saameeya dembi oo dhan, oo noo muujinaysaa in Ilaah uusan xaq ah, ma garsooraan oo ay la socdaan kuwa sharka leh.
Daniel iyo saddexdii nin ee foornada dabka ah oo ololaysa
H istorien ku saabsan Daniel iyo saddexdii nin ee foornada dabka ah oo ololaysa waa mid ka mid ah sheekooyinka ee Axdiga Hore muujinaya sawir cad ka mid ah dhib iyo dhamaystirka mustaqbalka.
Boqor Nebukadnesar, taas oo ah tusaale cad oo ka gees ah, ayaa kor u dhigay taalada ah oo dahab ah oo ku saabsan bannaankii Duuraa oo Baabuloon. Ogsoonow in taalada waa lixdan dhudhun, oo ballaadhkeeduna lix dhudhun yahay, oo waxaa loo ekaysiin karaa in ay hadal ka gees ah waa 666. Nebukadnesar oo qof kasta oo ku khasabtay in ay hoos u dhacdaan oo u sujuuddaan taalada this darajayn, halkaas oo noqotay cidhibtii kuwii ka faasiqoobay ahaayeen in la tuuray foornadii dabka ah oo ololaysa . foornada dabka ah oo gubanaya waa sawir ah cadhada Ilaah iyo cidhiidhi weyn ee fitnada. (Malaakii 4:. 1 - Bal eega, maalintii waa imanaysaa, waa u qaxmayaa sida foorno a)
S adrak, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo diiday in ay sujuudaan si taalada Nebukadnesar, oo waxaa lagu tuuray foornada dabka ah oo ololaysa. Markaasaa boqorkii wuxuu ku amray in foornada laga sii kululeeyo toddoba jeer waa in kulul ka badan aad abid arko inuu noqdo, oo waxaa jira sawir ah hadalka si kaamil ah. Rabbigu wuxuu malaa'igtiisii kuwaas oo la ilaaliyo Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo in foornada dabka ah oo ololaysa soo diray, oo waxay u soo baxeen iyaga oo aan wax dhaawac ah ama saameyn ah dabka.
Laakiin waxaa Su'aashaan ayaa sheekada this waa halka Daniel meel waa. wuxuuna ka mid ahaa kuwa jilibka u sujuuday taalada? Maxaa inuusan ka qeyb galay, iyo sababta ahaa ayuu sidoo kale ma tuuray foornadii dabka ah oo ololaysa. Waxaan noqon karaa si caddaalad ah qaarkood in Daniel waa jilibka in taalada Nebukadnesar ayaa u jilba joogsan. Daniel waxaa kaliya oo aan soo bandhigo, halkaas oo qof kasta u caabudi lahaa taalada, ama foornada dabka ah oo gubanaya dhibaatada. Ilaah waxa uu lahaa "isaga laga qaaday."
Tilmaanta in boqorku wuxuu lahaa nimankan in foornada dabka ah oo ololaysa ahaa in ay jireen saddex nin oo Yuhuudda (Dan 3:12). Saddexda nin Yuhuudda waa sawir ah Israa'iil la doortay oo loo kaydin doonaan iyada oo dhibta, iyo Daniel, gacaliyayaalow (Daniel 10:11) waa sawir shirka kuwaas oo loo kaydin doonaan ka fitnada.
Paul baray oo ku saabsan rayrayn
P aulus ahaa qofkii ugu horeeyay ee dhulka oo soo bandhigay waxbaridda iyo dajinta ee rayrayn, oo ku saabsan 20 sano ka dib iskutallaabta. Ilaa wakhtigaas waxay ahayd oo aan la garanayn, waayo, Ciise mana baraan rayrayn xertiisii in uu waqti. rayrayn kaniisadda waxaa inta badan lagu tilmaamay in 1 Tesaloniika 4:16 iyo 1 Korintos 15:52.
Mid ka mid ah Aayado cad ka GT in aan la qabsan karin shirka waa ka Isaiah 26: 19-21. Waxaan doonayaa in ay isku dayaan in ay is barbar dhigaan waxa aan ku aragno Isaiah cutubka 26, iyo cilmiga Paul ee ku saabsan rayrayn ee 1 Tesaloniika 4: 16-17 & 5: 9.
erayada Isaiah ee qoraalka madow iyo Paul ee cas.
J es 26:19 - Laakiin dhintay si aad ku noolaan doonaa; jidhkooda kici doonaa. (First kuwii Masiixa sara kici doonaa) Toos oo gabya, waxaad ku nool ciidda, waayo, dharabkaagu waa sida dharabka a iftiinka, iyo dhulka siiyo doonaa kuwii dhintay. Dadkaygow, kaalaya oo tagaan qolladihiinna galay, albaabbada xidha aad ka danbeeya. (Haddaba, waxaan taas oo kuweenna nool oo hadha waa la qaban doona ilaa daruuraha wada iyaga oo leh Rabbiga u hawada kula kulanno) naftaada wakhti yar dhuunta, daqiiqad, ilaa ay cadhadii ayaa maray by. Waayo, bal eega, Rabbigu wuxuu baxa uu meel u cadaabo dadka dhulka deggan xumaantooda u ka. (Waayo, Ilaah inama uu magacaabi silco cadho, laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix)
Sidoo kale waa ku xiga si ay tixraac Yooxanaa 14: 2-3 Ciise wadahadalo ku saabsan in guriga uu Aabbahay yihiin qolal badan, oo uu tegayaa meeshii diyaariyo noo. Golaha ayaa cod isku mid ah in John maqlay Muujintii maqli doonaa: - "Halkan soo fuul," oo aan qayb ka mid ah meesha Rabbiga u darbay noo qaadi doono. Waxaan yeelan doonaan si ay u tagaan qolalkiisa, oo albaabka inaga dambeeya xidhay. Oo waxaa dhacday, Rabbigu wuxuu meeshiisii ​​uga soo u cadaabo dadka dhulka deggan xumaantooda aawadeed - kaasoo ay sidoo kale cadhada Ilaah.
yabooha Tani ma aha oo ku saabsan soo noqoshadiisa arki karo meesha Rabbigu u imanayso in ay reer binu Israa'iil inay meesha ay joogaan. Arrintaasuna waa Yabooh kaniisadda in uu guriga ayaa ku maqnaa inuu Aabbaha inay halkaas meel diyaariyo noo.
In bilowgii kitaabka Muujintii, cutubka 4, waxaan la kulmi koox, Ma aynu la kulmeen ka hor ee Kitaabka Quduuska ah. Waxa uu hore saddex nebiyadii kale oo aan ahayn John qaadeen aragti ayaa lagu arkay carshigii Ilaah, laakiin midkoodna hore u saadaaliyey badnaa this. Oo Ishacyaah wuxuu ku arkay Isaiah Chapter 6. Ezekiel mana arkin in Cutubyada Ezekiel 1 & 10, iyo sidoo kale Daniel arkay iyagoo aan cutubka 7. Waa 24 odayaasha Waxaan qabaa fadhiya oo carshiga Ilaah Muujintii 4 agagaarka: 4aad
dadkii badnaa waxa uu sidaas ma jirto ka hor ku jirtay, laakiin hadda, ka dib markii toddobada kiniisadood in ay matalaan shirka ka eegaya dhinaca taariikheed iyo kuwii nebiyada, waxaan u aragto in samada. Waxay yihiin meel carshiga Ilaah ku dhawaad ka hor inta Dhibaatada ku yeelan doonto ay ku bilowdeen in Revelation cutubka 6, sidaas darteed, waxaan aaminsanahay in 24 oday wakiil kaniisadda kor waa in ka hor inta Dhibaatada helo ay ku bilaabatay.
24 oday carshiyo fadhiya sida ay xukumaan. Waxay carshiga Ilaah fadhiisataa, si ay u caawiyaan iyo caawin Rabbiga. Waxay fadhiistaan ​​si ay shaqada waxaa loo sameeyaa. Waxay kala yihiin dhar cad sida ay rättfärdigjorda yihiin. dharkoodii waa Himation, taas oo la mid ah sida ay qaybta iyo dharka Ciise. Waxay xiran taaj (stephanos) si ay u yihiin boqorro. Waxa ay sidoo kale ugu baaqay odayaasha kuwa maldahan diyaar u ah inuu shirka.
Marka sjungar sida waxay ku gabyeen förlöstas song Muujintii 5: 9-10;
" Adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabadihiisa furto, waayo, waxaad la laayay, iyo dhiig leh aad nin, waayo, Ilaah (na) ka qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo quruun kasta iibsatay. (Na) iyaga waxaad ka dhigtay inay gudaha boqornimo (boqorrada) iyo wadaaddadii Ilaahayaga, oo waxay (Annagu) boqor u ahaan doonaa dhulka.
S haddii jeer aad u badan, qoraalka aan si sax ah loo tarjumay ka soo qoraaladii asalka ahaa. King James leeyahay, ka mid ah tarjumaadaha kale fadhiistay jamac qofka ugu horeeya halkii. 24 oday isu aqoonsadaan leh Church soo furtay, oo waxaa la gashan iyaga oo kale, waa wadaaddadii iyo kuwii ay boqorradii iyaga oo kale, oo waa meel ka hor bilowga fitnada.
V ee sidaas arko oo dhan Kitaabka Quduuska ah tusaalooyin badan oo lagu daydo oo muujinaysa in Rabbigu uu shirka ka socda labada waqti iyo goob dhaqaaqi doono marka ay timaado xukunka dhammaadka wakhtiga ah in dhulka u dhaqaaqi doono.
Waxa uu na rujin doonaa, oo waa ina qarin gurigiisa Aabbahay soo socda inuu cadhadiisa ayaa maray by. Waxa aannu ku ballanqaadaynaa in la dhawray wixii adduun mari doonaan tan iyo ujeeddada iyo maado dhibaatadii ma aha shirka. Waxaan ma sugayaan gees ah, laakiin rajada barakaysan ee Ilaaheenna weyn oo ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix ka soo muuqan doona wakhtigii ammaantiisa. (Tiitos 3: 4) Eebaha na badbaadiyay cadhada imanaysa. (1 Th 1:10)
D et Tani waa post saddexaad oo aan qoro sida difaaca u ah cilmiga Pre-trib, kuwaas oo in Ciise soo kaxayn doonaa uu shirka ka hor tegaya toddobaadka 70aad iyo final of sano, iyo in xukummadaadu ay dhib ku baxa ka badan dhulka.
Qarni A doortay
U xira bandhigay ee soo laabashada Ciise ayaa mar kasta i kaabayaasha dhaqaale, iyo fikradda la doortay ee taariikhda aadanaha dhimasho uma dhadhamin doonaan, laakiin halkii ay yeelan doonaan in ay la kulmaan in la beddelaa dhacaya marka Ciise yimaado inuu wax u ururiyo oo uu shirka marayo in xididada loo siibo iyaga samada nool.
Maalinta habab madaxfurashada
D et dhigaya mawduuca si xiiso leh iyo muranka, waa in calaamadaha ku hadli aad si xoog leh in aan u dhaqaaqay dhanka this dhamaystirka mustaqbalka, iyo sidaas soo laabashada Ciise.
Dad badan ayaa maanta waxaa ka tan badiyey calaamadaha aan arki karnaa iyo waayo-aragnimo, iyo in Ruuxa Quduuska ah si cad u hadlay in kiniisadda Ilaah oo quluubta dadka si ay u helaan diyaar. In la xidhiidha in, ka dibna ay dadku bilaabaan in ay arkaan in maalinta madaxfurashada socdo, su'aasha xigta waa marka run ahaantii aan ka filan karaa in ay uppryckelsens daqiiqad dhaco?
The su'aalo badan weydiiso
E n Qaar ka mid ah su'aalaha ay dad badan is weydiiyaan ee la xidhiidha soo laabashada Ciise waa marka aynu ka filan karto rayrayn dhacaa? Golaha waxay yeelan doonaan in ay dhex maraan fitnada? Maxay tahay ujeedada fitnada, iyo waa run ahaantii ka gees ah ama Ciise, waa in aan sugaa? Ma soo laabashada Ciise iyo rayrayn oo isla ama laba dhacdo oo kala duwan?
Waxaan rajeynayaa in labada this post iyo kan ugu dambeeya waxaan jawaabta qaar ka mid ah su'aalaha waa qoran.
My xukunka shakhsi ahaaneed
T reviously Waxaan ahaa quruxsan ku qanacsanahay in Ciise ugu horeysay soo ceshano doona kaniisadda fitnada iyo rayrayn iyo Ciise laabto arki karo dhacdo la mid ah ka dib. Ciise wuxuu ka hadlayaa oo keliya ku laabanayo, iyo sababta ay tahay in shirka la badbaadiyey ka dhib markii labada Israa'iil iyo dunida inay dulqaadan doonaa? Waxaan arkay dhibaatadii oo ah geedi socod daahirintiisa lagama maarmaanka ah ee jidhka Masiixa, sababtoo ah qashinka aan ku aragno meelo badan maanta.
Laakiin markii aan markii hore lahaa qaar ka mid ah su'aalaha laga jawaabin aan heli waayey wareersan waxa aan akhriyi kari waayeen in Kitaabka Quduuska ah, waxaan isku dayay inaan ku riday su'aalaha si sax ah. gudbiyeen Kuwanu waa natiijo ka mid ah waxa aan la iman.
Sida loo hubiyo in aan maanta ahay badbaado ay iigu, anigu waxaan ahay marka ay timaado dhibic waqtigii rayrayn shirka. Ciise rujin doonaa uu shirka ka hor todobaadkii la soo dhaafay of sano iyo toddobaadka 70aad bilaabmaa, iyo Waxaan doonayaa in aan la wadaagno qaar ka mid ah dood in Waxaan qabaa hadlaa heer sare ah waxaa ka mid ah.
Kor iyo Ciise laabto arki karo
Yooxanaa 14: 1-3 - Qalbigiinnu yuusan murugoon. Rumeeya Eebe iyo i rumaysta. Guriga Aabbahay waa qolal badan. Haddii ay sidaas ahayn, waan idiin sheegi lahaa in aan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo? Oo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo, waxaan u iman doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan, si aad laga yaabaa in meesha aan joogo
1 Tesaloniika 4: 15-17 - waxaan idinku leeyahay by ereyga Rabbiga, waannu ka kaas oo kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka Rabbiga, sinaba ugama hor mari doonaa. Waayo, markii taliska weyn, oo cod weyn ee Mikaa'iil iyo buunka Ilaah, Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa. Markaasaa kaliya Masiixa rumaysnaa oo dhintay sara kici doonaa. Haddaba, waxaan taas oo kuweenna nool oo hadha waa la qaban doona ilaa daruuraha wada iyaga oo leh Rabbiga u hawada kula kulanno. Oo sidaas daraaddeed waxaan jiri doonto weligeed Rabbiga la
U ppryckelsen ma aha magac kale oo Ciise laabto arki karo. Waxaad dhihi kartaa in soo laabashada Ciise dhacaa marxaladaha laga bilaabo ku rayrayn iyo dhamaadka ee uu soo laabto arki karo dhibaatadii weynayd ka dib.
U ppryckelsen waa dhacdo aan la arki karin oo dhacda digniin la'aan. Waxaan ognahay, in si kale loo dhigo ma arrin sax ah markay dhacaan, oo waxa aan u sheegay in ay soo jeed iyo prayerful. Waxaan ogaan doontaa waqtiga ku saabsan rayrayn iyo waxgarasho ah marka ay bilowdo inay qandaraas, laakiin saacaddii iyo xilligan wax ku saabsan garan mayno, oo waxaa la qarin doonaa ilaa maalinta ay dhacdo.
Ciise kalabadhka u imanayaa inuu dhulka oo inaga hor imanaya in boos, ka dibna dib noo qaado samada, waayo, noo noqon meeshuu joogo isagu. Haddii Ciise sii waday in Earth ka dib markii rayrayn, ayuu sidaas noogu loo qaaday halkaas oo aanu nahay halkii. Laakiin sida laga soo xigtay John, oo intuu yimaado uu dib ugu soo helno meesha uu yahay, waa kan gurigiisa Aabbahay galay boqortooyadiisa jannada ah.
Ciise laabto arki karo
J esu laabto arki karo ma jiro aan la arki karin ama si qarsoodi ah u iman. Indhaha oo dhan arki doonaa isaga, oo wuxuu ahaan doonaa si buuxda u arki karo on daruuraha cirka. waqtiga maalinta sidoo kale la yaab ma laha, markaa, waxaan ogahay in uu doono isla markiiba ka dib dhammaadka dhibaatadii, ama sano oo kaliya 3.5 ka dib markii dhibaato weyn hore.
Dadka tiro yar oo ka badbaadaan dhibta awoodaan in ay ka markhaati dhacdo tani waxay noqon doontaa.
Haddaba siday erayadaas oo u gaar ah Sayidka
P aulus ku nuuxnuuxsaday, in ay tahay "by ereyga Rabbiga " markii uu barayaa ku saabsan rayrayn iyo sarakicidda.
First, waa 1 Tesaloniika waxaa qoray Paul saabsan AD 51, iyo malaha ma Injiillada weli ku qoran barta markii ugu markii Paul warqaddan qoray. Labaad, aad si fudud u leeyahay waxbaridda jirin Ciise ee ku sugan Injiillada meesha Ciise wuxuu ka hadlayaa qaar ka kici dhintay ka soo sara, halka ka kalena uu ka yimaado nool jeedin doonaa in isaga la kulmi daruuraha.
Ciise ku ogeysiiyeen sarakicidda kuwii dhintay oo kaliya ka, ku salaysan ballamada si aannu u aragno in Axdiga Hore. Waxaa, Sarakicidda kuwii dhintay Xurmaysan Yaboohay si degdeg ah dhibaatadii weynayd ka dib (Daanyeel 12: 2), iyo ka hor Millennium. Waa Ciise, Sarakicidda kuwii dhintay loo yaqaan nolosha ama sarakicidda taasoo iyana iska leh GT Southampton.
1 Korintos 15: 51-52 - Bal eega, waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon, oo dhan hurdo ma yeelan doonaan Waxaan, laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa, daqiiqad, ee bilig bilig ah isha ah, markii buunka ugu dambeeya. Waayo, buunku waa dhawaaqi doonaa oo kuwii dhintayna qudhunla'aan baa la sara kicin doonaa, waana layna beddeli doonaa.
D et ka dhigan tahay in Paul uu xambaarsanyahay, mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon in si dadban ula shirka u sameeyo, sida uu soo maray a erayo toos ah ama muujinta Rabbiga.
qarsoodi ah in Paul uu xambaarsanyahay, iyo taas oo aan marnaba lagu soo Dejiyey ama loo yaqaan, waa kaliya in la doortay ma dhiman doono, laakiin la kulmi doonaan waxa loo badali doonaa oo ku beddelmay, iyo kor loola qaadi doonaa kuwii dhintay, si ay u la kulmaan Ciise oo cirka jooga.
Waxaan doonayaa in aan noqdo meeshuu joogo
Yooxanaa 14: 1-3 - "ma qalbigiinnu ha u murugoon Rumeeya Eebe iyo i rumaystay In Guriga Aabbahay yihiin qolal badan Haddii ay sidaas ahayn, waan idiin sheegi lahaa in aan tago si ay u diyaariyaan meel... idiin sameeyo? iyo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo, mar dambe waan iman doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in, si aad laga yaabaa in meesha aan joogo. iyo meel alla meeshaan tegi, waad og tihiin in. sida aad ku ogaan. "
In Injiilka Yooxanaa, Ciise na siinaysaa dajinta gaar ah. Waxa uu ka hadlayaa wax nebi ma hore u lahaa ama waxa ay rajo. Meel aan ka akhrisan kartaa in Masiixu uu iman lahaa, laakiin halkii ay u soo ururin Saints Yeruusaalem ah ee dunidatan, wuxuu u qaadan lahaa inuu gurigii aabbihiis, oo waa meel ka mid ah, halkaas oo uu iska tegi lahaa.
Markii uu siinayaa yabooha, waa ku salaysan ee ah in " waan soo noqon doonaa dhabarka iyo xaggaygaan idiin qaadan, si aad laga yaabaa in meesha aan ahay." Waxa uu ka hadlayaa laabto, ma la xoraynta Yuhuudda inay sameeyaan, ama in la adkeeyo boqortooyadii dhulka, ama quruumaha xukumo. Waa eray keliya uu qaadasho gaar ah.
Yooxanaa 14: 1-3 iyo 1 Th 4: 13-18
D halkan waa isbarbar la yaab leh marka aan is barbar Labadan aayadood halkaas oo qaar ka mid ah erayada ama weedho yihiin ku dhowaad isku mid ah. Waxay kasta oo kale oo la raaco waqti isku mid ah, si ay u yimaadaan, iyo jidkii uu xabbad la dhisay.
Yooxanaa 14: 1-3 1 Th 4: 13-18
v.1 Pine v.13 walaacsan
Rumeeya v.14 v.1 Ma
v.1 Ilaah, i v.14 Ciise, Ilaah
aayadda 2 ayaa sheegay in aad v.15 kuu sheegi
v.3 soo laabto v.15 imaatinka Rabbiga
v.3 yeelanina V.17 Dafi
v.3 ii V.17 in ay la kulmaan Rabbiga
v.3 ahaan meesha aan ahay V.17 Rabbiga weligeen ula noqon.
Labada of aayadahan raaxo wayna ina muujinaysaa in hab gaar ah oo Rabbigu u imanayso in ay qaataan Mu'miniinta dhulka ka ammaana, samada.
1. Waxaa si fudud ma aayadaha Axdiga Hore ama Axdiga Cusub soo jeedinaya in kaniisadda iyada oo muddo dhib ku tegi doono, ama in kaniisadda waa taagnaan fool ka fool ka gees ka gees ah.
2. Dhibaatada waxaa la dhahaa "dhibkii dadka Yacquub" (Jer30: 7), laakiin marna loo yaqaan "shirka ama kaniisadda cidhiidhi ah".
3. Angel Gabriel in Daniel naadiyey in 70 toddobaad ayaa dadkaaga (Yuhuudda) dadkaaga iyo magaaladaada quduuska ah (Jerusalem) korkiisa oo goostay. waxaa kiniisadda aan halkan ku xusan. Dan 9:24
4. Golaha The lahayn ka qayb 69 toddobaad ee ugu horreeya, oo aan qayb ka mid ah la soo dhaafay iyo toddobaadka 70aad noqon doonaa.
5. In rayrayn Revelation dhacdaa Cutubka 4: 1 kuwaas oo muddo dhib ku sifeeyeen Cutubka 6-19. 24 oday oo wakiil ka ah shirka waa in ka hor shaabadda koowaad waxaa la jebiyey.
6. Golaha waxa lagu sheegay labaatan jeer in saddexda cutub ee ugu horreeyaana Muujintii, laakiin marna ku xusan inta u dhaxaysa cutubyada 4 iyo 19.
7. Muddada dhib weyn ayaa sidoo kale loo yaqaan "maalinta cadhada" (Zeph 1:15) ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin Ciise ma na doorataan xanuunsado cadho. (1 Th 5: 9), laakiin waa inaga samatabbixiyey "cadho" (1 Th 1:10)
8. Waqtiga Dhibaatada loo yaqaan Maalinta Rabbiga ee Kitaabka Quduuska ah (Zeph 1:15). Laakiin 1 Tesaloniika 5: 2-3 ayaa sheegay in maalinta Rabbigu ah (dhib ah) u iman doontaa sida tuug habeen ah. Marka dadka (gaalada) waxay dhihi, "Nabadda iyo ammaanka," ka dibna ku dhufatey (gaalada), ayaa la baabbi'iyey sidii si lama filaan ah sida xanuun ku yimaado guud ahaan dumar ah oo uur leh, oo iyagu (gaalada) ma baxsan doono. Waxaa cad in dhibta waa wax dhici gaalada, laakiin ma aha mid ka mid ah aaminka ah oo la badbaadiyey.
9. Waxaan tacsiyeeyaan doonaa mid kasta oo kale oo la hadal of rayrayn (1 Tesaloniika 4:18). Ma jiro raaxada ee baridda in ayaa sheegay in kaniisadda tegi doonaa iyada oo qayb ka mid ah ama dhammaan domstid fitnada.
10. Ciise wuxuu inoo ballan kaniisadda Philadelphia in uu doonayo in loo ilaalin lahaa kaniisadda, iyo "idinka badbaadin baxay saacadda jirrabaadda oo, taas oo dunida oo dhan iman doonaan, oo dadka ay imtixaanka keenaan." (Muujintii 3:10) Eebe wuxuu u yaboohay si loo ilaaliyo shirka aamin baxay muddo dhib.
11. Sida Enoogna waxaa kor loogu qaaday samada daadka hortiisa iyo Nuux waxaa la ilaashaa, iyada oo loo marayo daad, Golaha la kor ka hor inta dhibaatada iyo Israa'iil haraaga ah ha la wada ilaaliyo iyada oo dhibaatadii.
12. In si la mid ah in Ilaah ma laga yaabaa xukumi Sodom iyo Gomora hor Luud laga fogeeyey magaaladii ahayd, Ilaah dunida this ma xukumi karaan ka hor inta xaqa ka dhammaatay. (1 Gen. 19:16)
13. Ciise wuxuu ka hadlayay xilliga fitnada markii uu weydiiyay: ". Vaka had iyo tukadaan xoog in ay ka baxsadaan waxaas oo dhan in ay yimaadaan oo ay u Wiilka Aadanaha isu hor taagtaan" (Luukos 21:36) Waxaa macno lahayn in Ciise ku weydiiyo wax uu uusan dooneynin in uu sii.
14. Malaakii 3:18 Rabbigu wuxuu leeyahay (yimaadaan) noo tusi doonaa faraqa u dhexeeya kan xaqa ah iyo kan sharka ah, inta u dhaxaysa hal kan Ilaah u adeega iyo isaga oo aan u adeegaya. Pre-trib aaminsan yihiin in Rabbigu u imanayso in ay soo ururiyaan uu shirka, ka dibna waxaan ku yimaado isaga u dhaxaysa kan xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn xukumo.
15. At rayrayn, Ciise yimaado waayo kaniisaddiisa (1 Tesaloniika 4: 16-17) markuu yimaado dhamaadka fitnada, isagu waa u imanayaa iyadoo uu shirka. (1 Th 3:13).
16. In xarfaha toddobada kiniisadood in Ciise martiqaaday in ay "maqlo waxa Ruuxu ku leeyahay shirka." Laakiin in dhibaatadii weynayd, ka dib markii in Ruuxa Quduuska ah ee kaniisadda waa in dhinac fadhiistay, ayuu ku yidhi: "Kan dhego wax, ha maqlo" (Muujintii 13: 9) wuxuu ka tegayaa Golaha, halkaas oo ah kiniisadda lahayn inay dhegaystaan ​​Ruuxa ku hadla oo in ay dhex maraan fitnada.
17. ka gees ah ka dhigi doonaa kula dagaallamo quduusiinta, iyo awood u leeyihiin in ay iyaga laga adkaado. (Rev 13: 7). Laakiin ma noqon karto, ehelkeedu waa lagaga hadlay halkan. Ciise qudhiisa ayaa balan qaaday in uu "dekedaha helvets waa inaanu ahaan shirka kuwa xoogga badan." (Matayos 16:18)
18. Ciise kuma odhan: "Marka ay tani ku dhacday," ka dibna kor u toosin iyo madaxyadiinnana kor u qaada, laakiin "Marka waxan oo dhan (calaamadaha) bilaabo inuu dhici," sidaas toosi ilaa iyo madaxyadiinnana kor u qaada, maxaa yeelay, madaxfurashadiinnu. (Luukos 21:28).
S buuraha aan doorto laba Qorniinka, ee GT iyo NT, wada hadalka, oo ku markhaati fura in kaniisadda uma gudbi doono cadhada Ilaah, ama dhib, waxaan doonayaa in aan farta ku Labadan aayadood ee soo socda:
1 Tesaloniika 1: 9-10 - The ay ka hadlaan sida naloo helay oo idinka mid ah iyo sida aad uga jeesateen oo Ilaah sanamyada si ay ugu adeegaan kuwa nool iyo kuwa Ilaaha runta ah iyo in ay sugto Wiilkiisa ka yimid xagga jannada, kan Ilaah kuwii dhintay, Ciise ayaa naga samatabbixiyey cadhada imanaysa ka soo sara kiciyey
Ishacyaah 26: 19-21 - Laakiin dhintay si aad ku noolaan doonaa; jidhkooda kici doonaa. Toos oo gabya, waxaad ku nool ciidda, waayo, dharabkaagu waa sida dharabka a iftiinka, iyo dhulka siiyo doonaa kuwii dhintay. Dadkaygow, kaalaya oo tagaan qolladihiinna galay, albaabbada xidha aad ka danbeeya. inaad ku dhuumato daqiiqad kooban ilaa ay cadhadii ayaa maray by. Waayo, bal eega, Rabbigu wuxuu soo baxa uu meel u cadaabo dadka dhulka deggan xumaantooda aawadeed. Dhulkuna wuxuu ka dhigi doonaa dhashay daymaha dhiigga iyo in dambe qarin laayay.
yabooha fulin waayay
V ee aan ka arki kartaa in tuducdan ka Isaiah abid ka hor ayaa la fali. Waxa aanu sidoo kale ku raacsaneyn sarakicidda in Ciise ku ogeysiiyeen iyo Daniel sheegayaa Daanyeel 12: 2, oo aan og nahay dhici doona ka dib markii Dhibaatada iyo ka hor.
Halkan Isaiah hadla halkii sarakicid ka dhacda markii uu Rabbiga ugu horeysay loo yaqaan dadka ay qolalka oo ay ka hor iyo ka hor cadho in Ilaah iyo xukunkiisa ka baxa dhulka u taliyo.
"K ku saabsan dadkayga," taas oo run ahaantii ka dhigan tahay "lumis" ama "u noqdaan la arki karin", waa isku midka ah la yaab leh si ay u waayo-aragnimo ah ee John lahaa in Revelation cutubka 4, halkaas oo uu ku arkay albaab furan oo jannada ku jira, iyo waqti isku mid ah ka maqlay codkii Ilaah oo sida buun oo kale ayaa yiri: "halkan sare kaalay." Kolkiiba Ilaah ka dib, qabow noqdo John kor loogu qaaday xagga carshiga Ilaah, halkaas oo uu yahay samada ka eeg dhib ciyaaray dhulka.
John matalaa kaniisadda this in la mid ah la kulmi doonaan on uppryckelsens maalintii. Iyada amarka ah, cod malaa'igta sare iyo buunka Ilaah, shirka ayaa laga soo qabtay doonaa samada iyo arki doonaa dhib kala fur dhulka.
Si ay isugu dayaan oo u ciqaabo dadka dhulka deggan
Muujintii 3:10 - Waayo, waxaad hadalkayga xajiyeen ku saabsan dulqaadasho, waxaan kaa dhawri doonaa iyo saacadda jirrabaadda oo uu idiin badbaadiyo, taasoo dunida oo dhan iman doonaan, oo dadka ay imtixaanka keenaan
J esaja ka hadlaysaa "Rabbigu u imanayso soo meeshiisii u cadaabo dadka dhulka deggan xumaantooda u ka." Sidoo kale Xaqiijiyay Muujintii 3:10 Saacaddaas jirrabaadda (dhib), taas oo dunida oo dhan waxay u iman doontaa waa in dadka ay imtixaanka gelin.
Labada wadahadalo Isaiah iyo Muujintii ku saabsan ujeedada Dhibaatada waa in la ciqaabo oo isku day oo dadka dhulka deggan oo dembigiinna aawadiis ay iyada wax u yeedhay cadhada Ilaah. cadho la mid ah in labada aayadahan markhaati furayaa nahay inaynu ku badbaadi ka, by Rabbigu nagu oo ku baaqay in guriga in reerkii aabbihiis, guriga si qolalkiisa ilaa ay cadhadii ayaa maray by.
Nin jasiiradda cidla ah
O m aan samayn karin tijaabo ah oo nin saaray jasiiradda cidla ah, iyada oo keliya Kitaabka Quduuska ah oo gacanta ugu jira, laakiin Bannaanbaxyada iyo dhaqan fikrado caqiido. Maxaa gabagabo uu soo gaarnay heer ah marka la eego dhibic waqtigii rayrayn ka?
First, uu ka bartay Ishacyaah 13: 9-13, iyo Amos 5:18 in Ilaah dhulka xukun lahaa sababtoo ah iyagoo dembiyadooda by daadiyaan cadhadiisa dhex domstid daran sida Kitaabka Quduuska ah wuxuu sharaxayaa sida maalinta Rabbiga.
Ishacyaah 13: 9-13 - Bal eega, maalinta Rabbigu u imanayso, laga cabsado, cadho iyo xanaaq kulul, inay dalka baabba 'iyo baabbi'i dembilayaasha oo halkaasi ku nool. ma Waayo, xiddigaha samada iyo ururkooduba markab more iftiinkeeda. qorraxdu soo baxdo gudcur, oo iftiin moon ee ma aha on. Waxaan dunida u ciqaabi doonaa sharkeeda aawadiis, kan sharka leh u noqdeen xumaantooda. Waxaan ka dhigi doonaa tayoba ku stoltas oo garaacayaa hoos Murtadinta kibirka. Waxaan ka dhigi doonaa nin wax dhif tahay dahabka saafiga ah, nin wax dhif badan ah dahabkii Oofir. Sidaa darteed waxaan ka dhigi doonaa samooyinka gariirin, iyo dhulka inay dhaqdhaqaaqdo rux si aasaaska -by Rabbiga ciidammada oo xiqdi ah, oo uu ku gubanayso cadho.
Amos 5:18 - Hoog waxaa leh kuwa u ooman yihiin maalinta Rabbigu! Waa maxay sababta aad u ooman, waayo? Maalinta Rabbigu waa gudcur, oo iftiin ma aha.
G eNom in ka dibna akhriyo on Matthew cutubka 24, uu wax arki karay in waqtiga xukunka noqon lahaa si dhab ah in haddii aan Rabbiga soo gabagabeeyay waxa ay noqon doontaa ma badbaadada aadanaha. Halkii, Rabbiga domstid this ku dhameysan doonta kaalinta by ee xoog iyo ammaan u celiya dhulka this. Markii uu ogaaday in soo laabashada Ciise weli ma ku dhacay, sidaasi darteed waxa uu ogaa in cadhada Ilaah weli meel mustaqbalka.
Markii uu 1 Tesaloniika 9-10 yimid si uu arki karin war qoraal ah oo quruxsan cad. Waxa uu ku saabsan Ciise akhriyey kii ina badbaadiyay oo naga samatabbixiyey cadhada imanaysa.
1 Tesaloniika 1: 9-10 - The ay ka hadlaan sida naloo helay oo idinka mid ah iyo sida aad uga jeesateen oo Ilaah sanamyada si ay ugu adeegaan kuwa nool iyo kuwa Ilaaha runta ah iyo in ay sugto Wiilkiisa ka yimid xagga jannada, kan Ilaah kuwii dhintay ka soo sara kiciyey, Ciise ayaa naga samatabbixiyey cadhada imanaysa.
Ingiriisi turjumaad (NIV): ..and inay sugtaan Wiilkiisa uu ka yimid xagga jannada, kuwaasoo uu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey - Ciise, cadhada imanaysa inaga samatabbixinaya.
G eNom in uu akhriyo aayadda Bible ee uu uga jawaabi kari waayeen su'aalaha soo socda "kuma, maxay, meesha, goorta iyo sababta." Yaa (Ciise) Maxay (oo Badbaadiyay oo na badbaadiyay), marka (time of cadhada). By reading dheeraad ah 1 Tesaloniika 4: 15-17, uu akhriyi kari waayeen in "qof walba" waa Dhulka daruuraha cirka ka, iyo in 1 Tesaloniika 5: 9 ayaa la weydiiyay sababta oo iyaguna markii aan Akhrino, in aanu ku Qaddarray u xanuunsataan, cadhada Ilaah, laakiin si aad u hesho badbaadada xagga Ciise Masiix.
1 Tesaloniika 5: 9 - Waayo, Ilaah ma na doorataan xanuunsado cadho, laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix
Ingiriisi turjumaad (KJV): Waayo, Ilaah ha naga magacaabay in ay cadho, laakiin inuu helo badbaadada ee xagga Rabbigeenna Ciise Masiix
V ur tusaale ahaan ku arki kartaa in, in nahay inaynu ku badbaadi oo ku saabsan waqti isku mid ah dhibcood cadhada Ilaah ayaa sida innagu ma nihin qaar ka mid ah in, sidaas daraaddeed ayuu gabagabayn kartaa in rayrayn halkii waxa ay ka dhigan. Kor alltstå doonaa in ay kiciyaan oo cadhada Ilaah ku jirto dhulka ku dhaco ay ku bilowdeen in Revelation cutubka 6 korkiisa.
Jawaabaha su'aalaha badanaa lays weydiiyo post-trib
M joogto ah ed inta badan doodaha iyo su'aalaha ka dadka aan rumaysan doonaan rayrayn ka hor fitnada. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah iyaga ka mid ah:
"Bible ma barin in ay jiri doonaan laba advents. Sidee baad u odhan kartaa in Ciise laba jeer iman doonto? "
Jawaab: Just la mid ah si la mid ah, waxaa jira laba sawir oo kala duwan oo Masiixa ee Axdiga Hore (adeegaha dhibaatoonaya iyo Boqorka), waxaa jira laba sawir oo kala duwan oo soo laabtay Ciise waa adag tahay in la wada heli. Labadan isku xigxiga waa rayrayn iyo Ciise laabto arki karo. Waxaad odhan karin, Ciise 'soo laabtay waxaa loo sameeyaa in marxaladaha meesha rayrayn bilaabo, iyo Ciise laabto arki karo ayey u dhammaatay. Waxa si fudud waa meelaha ama dhacdooyinka aad u kala duwan.
"Ciise wuxuu ku yidhi in rayrayn qaadan lahaa meel fitnada ka dib markii ay si deg deg ah (Matayos 24: 29-31). Markii uu soo dejiyaa Malaa'igta inay soo ururin Kuwiisa uu doortay"
Jawaab: qaadida The ma dhici karto in Matthew cutubka 24 sababo dhowr ah:
At rayrayn waa in meydadka Mu'miniinta ammaanta na ka dhigaysa sidii Ciise at dardar loosoo qaban karaa iyada oo aan kaalmo ka mid ah Malaa'igta. Waa maxay sababta aan u baahan tahay in lagaa caawiyo sidii wax malaa'igahu hagaajiyeen at rayrayn, marka waxaan u jeestay ammaanta meydadka?
Malaa'igta ayaa sidoo kale isu soo wada ururiyaa orättfärdia barta waqtigan (Matayos 13: 38-43, 49-50)
Haddii mid ka mid ah ayaa sheegay in Malaa'igta waa ururinta Mu'miniinta ee Matthew 24 waxaa upprycklsen waa Matt 13 sidaas oo kale waxaa jiri. In Matthew 13, aynu aragno waqti isku mid ah in ay tahay kuwa sharka leh marka hore la tagi doona dhulka oo aan kuwa xaqa ah.
Malaa'igta ayaa waxaa loo soo diray inay soo wada urursadaan kan xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn labadaba lagu xukumi doono Ciise wuxuu hor boqortooyada 1000 sanadka. Dadkani waa in jidhkooda dabiiciga ah, halkaas oo sharka leh waxaa lagu tuuray baddii dabka ahayd, halka kuwa xaqa ah waxaa loo ogol yahay til boqortooyada 1000 sanadka dhaxli.
Soo noqoshada Ciise ee Matthew 24
Matthew 24:31 - Iyada oo wata buun weyn, wuxuu soo diri doonaa malaa'igihiisa diri, oo kuwuu doortay ayay ka soo ururin doonaa afarta dhibcood jiifoo, mid dhammaadka samada kale ka.
M ilaa 24 waa Suurad oo qeexaya Ciise arki karo inay yimaadaan Israa'iil iyo dunida oo dhan. In xukun cadaawayaashiisa, iyo in la dhiso boqortooyadii Masiixa. Inta badan fiiqaya in ay la doortay In aayadda 31, oo ku andacoonaya inay yahay shirka. Waxaan qabaa inay tahay arrin cad in qaybta doortay Yuhuudda waxaa uu ku saabsan yahay.
Isku day inaad xataa keeni aayaadka soo socda ee la xiriirta Matthew 24:31:
Ishacyaah 11:11 - Markaasaa Rabbigu wuxuu noqon doonaa waqti in mar kale intuu gacantiisa soo taagay, si ay u helaan naftooda dadka intiisii hadhay oo uu , waxa laga soo samatabbixiyey Ashuur, Masar, Fatroos, Itoobiya, iyo Ceelaam, iyo Shincaar, iyo Xamaad, iyo gasiiradaha .
Ishacyaah 11: 12 Waxa uu kicin doonaa calan quruumaha iyo ururin la naco oo reer binu Israa'iil oo kala firdhay oo dadka Yahuudah oo afarta rukun ka.
Banner iyo buun
B Anner iyo buun u taagan kor u yeedhista dadka. Shaki kuma jiro qabatinka isla ay ka hadlayaan, oo Ilaah leeyahay iyada oo Isaiah in ay tahay rag iyo dumar, kuwaas oo u yeedhay reer binu Israa'iil. la doortay waa aamin Yuhuuddii ah oo ka badbaaday Dhibaatada, iyo in wakhtiga, waxaa la kala firdhiyey dhulka oo dhan u taliya. All Yuhuudda guriga, kaas oo sidoo kale waa in wada noolaanshaha buuxa la GTs erayada nebiyada. Waa cadeyn ah in aan la hadlayo ku saabsan kaniisadda ee marinka.
"Pre-trib waxaa soo bandhigay qaar ka mid ah kuwaas oo ka cabsadeen inay maraan cadaadis"
Jawaab: Marka aan ka hadlo dhibaatada waa in aan bilaabi by kala dhibaatada guud ee aan la kulmaan dunida (gr.thlipsis) iyo dhibaato aan la kulmi in dhibaatadii weynayd (gr.Thlipsis megas) in Ciise wuxuu ka hadlayaa in Matthew 24, iyo Daniel Cutubka 12aad
cilmiga Pre-trib waxba kuma soo baxo on Mu'miniinta in baxsan doono cadaadis. Ciise sii sheegay in aan necbaan doona adduun isaga aawadiis (John 15:18) ee. In dunida rumaystayaasha dhabta ah la kulmi doonaan loollan xagga ruuxa ah ka dhanka ah madaxda iyo kuwa amarka, xagga jidhka iyaga u gaar ah, iyo dhibaatada injiilka. noocaas ah ee silica, Ciise marnaba noo ballan-qaaday in aan xor ka noqon doonaan. cadho aan la kulmaan in dhibaatadii waa wax kala duwan iyo wax aan ereyga ayaa noo ballan-qaaday in aan u baahan tahay ma la kulmaan ama dhex mari. (1 Th 5: 8)
"Paul ayaa sheegay in 2 Tesaloniika 2: 1-9 in rayrayn aan dhicin ka hor ka gees ah u muuqataa"
Jawaab: Paul ku hadla ee rayrayn ee la xiriirta maalinta Rabbiga, oo aan enstydig Ciise laabto arki karo. Maalinta Rabbiga ma aha hal maalin ah ku betydningen of 24 saacadood, laakiin in muddo ah xukunka soo baxa dunida ugu soo galay. (Ma 2:12, 13: 6, Ezekiel 13: 5, Joel 1:15 Caamoos 5: 18,20)
Kaniisadda ee Tesaloniika baqeen oo ka welwelsan in ay horay isu helay gudaha xilliga fitnada. Paul suura iyaga iyo sheegayaa ka gees ah waa in marka hore la muujiyo ka hor ay dhacdo. Marka gees bilaabmin axdigiisii ​​uu la dhigtay reer binu Israa'iil wuxuu bilaabaa todobaadkii la soo dhaafay of sano, ama dhib.
Sidee dadka waa la badbaadin karaa dhib ah Ruuxa Quduuska ah waxaa dhulka ka soo baxeen?
Jawaab: Taasi Ruuxa Quduuska ah waa in la ag fadhiyey oo micnaheeda ma ahan in ay suuragal badbaadada hadda ma jiro, laakiin in Ruuxa Quduuska ah degganaan doonaa qalbiyada dadka meeshaas oo aannu u leedahay Ruuxa Quduuska ah sida shaabad oo waa wax u gaar ah da'da kiniisadda.
Ka hor inta xilkani Ruuxa Quduuska ah maalintii Bentakostiga ahaa dad sidoo kale la badbaadiyey, iyo Ruuxa Quduuska ah oo dadka u muuqday. Marka Ruuxa Quduuska ah ayaa lagu soo shubay maalintii Bentakostiga, Maanaan ahayn Ruuxa "labaad" a Quduuska ah dhulka. Sida Axdiga Hore, dadka waa la badbaadin doonaa inta lagu guda jiro fitnada, kuwaasoo Ruuxa Quduuska ah ka shaqayn doonaa si la mid ah sida in Axdiga Hore, saldhig ka kor ku xusan.
Su'aalo cilmiga Post-trib
S amtidigt sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah su'aalaha laga jawaabin in cilmiga Post-trib waa ay adag tahay in aad ka jawaabto ama siin sharraxaad sax ah ee:
Haddii rayrayn ugu horeysay yimaado Ciise arki karo iman, oo markaas dad doonaa Millennium?
"Haddii aad u malaynayso in kaliya badbaadiyey helaan qayb ka mid ah Millennium, iyo rayrayn ugu horeysay yimaado Ciise arki karo markii waajib mabda dhammaan dadka Millennium in ay u jeediyeen meydadka weligeed ah. Laakiin markaas kii dad doonaa Millennium, marka dhalmo ah la samayn karaa oo keliya by dadka in meydadka dabiiciga ah "?
Jawaab: Waxaa la sameeyaa by dadka ayaa ku badbaadiyey ka dib markii rayrayn inta lagu guda jiro fitnada. Markaasaa nimankii waxay tagaan Millennium in meydadka dabiiciga ah ay.
Waa maxay sababta rayrayn laguma sheegin in Muujintii 19: 11-23 ama Wax Chapter 14?
"In Muujintii cutubka 19, waxaan ka heli sharaxaad of Ciise laabto arki karo, laakiin waxa ay sheegaye mana sarakicidda ama rayrayn. Sekaryaah 14: 1-7 sidoo kale sheegeysa in dhacdadan, laakiin meel aan waxaa ku xusan. War sow ma aha la yaab leh in mid ka mid ah ay dhacdo taariikhda ee ugu weyn oo ku lug leh, Sarakicidda kuwii dhintay ka mid ah boqolaal malaayiin qof oo aan soo sheegnay hana Muujintii cutubka 19 ama Wax Chapter 14? Waa maxay sababta? "
Jawaab: qaadida ama sarakicidda laguma sheegin sababta oo ah waxay si fudud aan loo samayn barta waqtiga.
Yaa marka hore loo qaadi doono, daalimiintu (Matayos 13: 30,41,49) ama kuwa xaqa ah? (1 Tesaloniika 4: 16-17)
Labada 1 Tesaloniika iyo Matthew 13 ayaa sheegay in sarakicista kala qaado kaalinta koowaad. 1 Tesaloniika sheegayaa uppståendelsen shirka soo horeeya, laakiin Matt 13 arkeen in marka hore aan xaqa ahayn dhulkaa laga qaaday. Labada kooxood oo ma noqon karo ugu horraysay ilaa maalintii laga saaro?
Jawaab: Waxaa jira laba dhacdooyin gaar ah in si fudud ma isku mar dhacaan .
Xaqiiqada ah in ay ku badbaadi waa loo abaalgudi doonaa taaj at rayrayn (maxkamadda Masiixa) Sidee 24 odayaashii hore u leedahay iyaga (Muujintii 4: 4-10) xataa haddii rayrayn ayaa dhacay?
Jawaab: qaadida waa in uu leeyahay meel qaaday ka hor inta shaabadda koowaad waa jabtay.
Maxaad idaha iyo riyaha noqon soocay fitnada kuwa hore u ahayd in rayrayn ka dib? (Matayos 25: 31-33)
Jawaab: Iyada oo rayrayn ma dhicin Ciise laabto arki karo, sidaa sameeyaan idaha iyo riyaha (badbaaday qof oo dhib ah) oo kala duwan ka hor inta Millennium.
Halkee oo dhan "unsaved" Marka taas laga heli doonaa dhamaadka Millennium? (Rev 20: 7-10)
Jawaab: Waxaa jira dadka ku dhashay inta lagu guda jiro Millennium. Waxay farcankiis waa kuwa ku soo galay Millennium in meydadka dabiiciga ah ay.
Yaa waxaa haysta dib si ka gees ah weeraryahanka ma iman karo?
Jawaab: Ruuxa Quduuska ah ee kaniisadda waa caqabadda ugu wayn ee in ay ka gees ah oo aan hore u iman karin.
Ciise ballan qaaday in John 14: 1-3 inuu diyaariyo lahaa meel Mu'miniinta jannada ku jira, dabadeedna soo noqda in ay naga qaataan, meeshuu joogo isagu. Pre-trib ayaa sheegay in Ciise soo laaban doonaa si ay halkaas ugu noqon karaa uu shirka. Maxaad Ciise diyaariyo lahaa meel noo samada iyo markaas ma waxaa noo qaado?
Jawaab: cilmiga Post-trib waa mid aad u adag si ay u sharxaan Yooxanaa 14: 1-3
ku dhawaaqidda Ciise in Naasared
Luke 4:. 18-19 - "waa Ruuxa Rabbiga ayaa i dul saarnayd, Waayo, wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo, Wuxuuna ii soo diray in ay xorriyad waxay maxaabiistii iyo soo kabashada araggooda indhaha la'aa u naadi, inaad siiso dulmay xorriyadda iyo dadka ogeysiiyo sannadda qaabbilaadda ah ee Rabbiga
E 1-2 oo naadiyey in erayadan yimid run u raaceen Ciise jirrabay oo lamadegaanka ku yaal, ayuu Naasared, halkaas oo uu ka Isaiah 61 akhriyo yimid. Waxa ay u aragto waa in Ciise istaago bartamihii xukun-la'aan dhamaystirka wax sii sheegidda oo dhan Isaiah.
Sababta Ciise istaago dhexe ee aayadda waa in qaybta hore ee aayaddani waxa uu ahaa mid uu kula soo socda hore iyo wasaaradda uu dumo inay sameeyaan. Qaybta labaad ee wax sii sheegidda waxaa lagu dhamayn doonaa oo kaliya ka dib markii kaniisad waxaa dhulka ka soo baxeen.
Israa'iil iyo Kaniisadda
Falimaha Rasuullada 15: 13-18 - "Walaalayaalow, i maqla, Simecoon ayaa ku tilmaamay sida Ilaah markii ugu horraysay u xaqiijiyey inay dad uu ku guuleystay inuu magiciisa quruumaha dhexdooda, waayo, Waa waafaqsan tahay hadalladii nebiyada, oo wuxuu leeyahay, Markaasaan waan soo celin doonaa.. iyo dib u dhiska Daa'uud hoygoodu dhacay. burbur ah Its labaad ayaan dhisi doonaa, oo waxaan u taagi doonaa,
D et jira sababo kale oo fiqi ahaaneed in kiniisadda la kor doonaa toddobaadka 70aad iyo final of sano.
Haddii sababta aasaasiga ah ee toddobaadka 70aad waa inaad buuxiso lixda ballamo in Israa'iil in aan ku aragno Daniel 9:24, ka dibna shirka tagtay ka hor. Yacquub ka marag furaa in ku sugan Falimaha Rasuullada 15, sequentially waqtiga Golaha dhulka ka dib, Rabbiga ku noqon lahaa uu diiradda oo ay sii wadaan barnaamijka ay la Israa'iil. Kor dhici doonaa hal dhibic waqti oo kala duwan ka badan Ciise laabto arki karo of Sayidku wuxuu leeyahay barnaamijyada kala duwan ee Israa'iil iyo Kaniisadda.
Dhibaatada kale loo dhigo, laba la wadaago. Qayb ahaan in Israa'iil ha isdaahiriyo, iyo labaad, iyo inaad baabbi'isid oo ka samaysan la quruumaha gaal. (Jer 30: 1-11). Oo ururka oo aan taabacsaneyn la ujeeddooyinkan.
Muujintii 11:15 - Markaasaa malaa'igtii toddobaad afuufeen uu buun . Markaas waxaa laga maqlay samada codad xoog leh kuwaas oo yiri: ". Boqortooyadii dunidu hadda iska leh Rabbigeenna iyo Masiixiisa, oo isna boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiisba"
E n Qaar waxay yidhaahdaan in rayrayn iyo ka soo sarakicidda in dhacdaa markii buunka ugu dambeeya waa isku mid sida ee 7aad iyo buun dhaafay waxaan la kulmaan in fitnada. Laakiin waa in aan ku khaldin toddoba buun ka dhex Muujintii 11:15, la buunka ugu dambeeya ka tirsan Qiyaamada.
First, ma jiro wax farqi ah in labada maado iyo saamaynta on kuwan Laba turumbo oo markii buunka Ilaah waa buun badbaadada, in la barbardhigo toddobadii buun aan la kulmaan in Revelation waa markii dunidan la xukumi this. Trump Ilaah waa xirfad ilaa sarakicidda, iyo kulan ka mid ah dadka Ilaah.
Ma aha Rabbiga ah buunafuufid in buun ka dhex dajiyay, laakiin Malag. Markii malaggii daheysha buunka, waa calaamadda in dhibaatadii weynayd bilaabmaa, iyo 3.5 sano ee ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in ay bilaabeen. Ugu dambayntiina, markii buunka Ilaah codadka sidaas darteed waxaa transmutes kaliya dhacdo weyn, halka daayo buun toddobaad dhowr dhacdooyin kala duwan.
1 Tesaloniika 5: 2 - Haddii wakhtiyada iyo xilliyada, walaalayaalow, waxaannu uma baahna in ay idiin soo qoro. Waxaad og tihiin si aad u wanaagsan in maalinta Rabbigu u imanayso sida tuug habeen u yimaado. Markii ay dadka ku yidhi, "Nabadda iyo ammaanka," ka dibna ay la il daran burburinta sidii si lama filaan ah sida xanuun ku yimaado guud ahaan dumar ah oo uur leh, oo iyagu ma baxsan doono. Laakiinse idinku, walaalayaalow, gudcur kuma jirtaan in maalintaasu idiin qabato sida tuug oo kale.
M dadka uumi samayn iyo waxaa loola jeedaa Maalintii Rabbiga sidii maalin kooban oo gaar ah oo 24 saacadood, kaas oo ka dhici dhammaadka dhibaatadii markii Ciise laabto arki karo. Sayidka ka dhigan tahay in maalinta Rabbigu iyo rayrayn waa kuwo isku oo ka baxa on mid ka mid ah.
Malaha aayadda ugu soo xigtay waa kaliya 1 Tesaloniika 5: 2, kaas oo ku sheegay rayrayn oo xidhiidh la leh Maalintii Rabbiga. Sida maalinta Rabbiga si la mid ah in Ciise yimaado sida "tuugga habeenkii" in aad isku xira inta badan isku qaldin labadan dhacdo.
Laakiin u eegis lagu sameeyo bivelverser qaar ka mid ah kuwaas oo sheegaye Maalinta Rabbiga muujinaysaa in aysan kaliya tixraac maalin keliya, laakiin waqti xukun ah oo daboolaya labada Dhibaatada, Ciise laabto arki karo iyo Millennium.
Yoo'eel 2: 11-20 - Maalinta Rabbiga ka mid ah weerar ka soo furtay cadowga xagga woqooyi, kaas oo dad badan oo rumaysan yahay weerar la mid ah aan ku aragno Ezekiel 38-39. Qaar badan waxay aaminsan yihiin in dagaalka kuwaas oo ah Juuj / Maajuuj dhacdaa qaybta hore ee Dhibaatada ka.
Joel 3: 4 - Halkan waa Maalintii Rabbiga ku xidhan Ciise laabto arki karo iyo inuu xukunka ku soo quruumaha.
2 Butros 3: 10-23 - Halkan Maalintii Rabbiga ma gudbin karaan Ciise laabto arki karo, ka dibna waxaynu og nahay in maalinta meydadka oo jannada waa la kala diri doonaa, oo waxaan ka heli samooyin cusub iyo dhul cusub oo kaalinta koowaad ka dib 1000 sano ee Empire.
Muujintii 20: 4 - Oo markaasaan arkay carshiyo, oo waxay ku fadhiyey ayaa iyaga la siiyey amar uu wax ku xukumo. Oo haddana waxaan arkay nafihii kuwii madaxa looga jaray maxaa yeelay, waxay ka marag kacay Ciise iyo ereyga Ilaah iyo kuwii aan caabudin bahalkii iyo sanamkiisa, iyo ma helin sumaddii on foodda ama gacanta. Waxay ku noolaa oo Masiix wax la xukumeen kun oo sano. Laakiin dadkii dhintay intoodii kalena mar kale aan ku noolaa ilamaa ay kunkii sannadood dhammaadeen. Tani waa sarakicidda kowaad.
DSarakicidda kuwii ugu horeeyay ee Muujintii 20: 4 sidoo kale waa wax in uu ahaa mid dood badan oo hore iyo dib, oo waxaan u malaynayaa in ereyga Kitaabka Quduuska ah ku hadlo isu marka aan ku akhriyey. Waxaan ku arki kartaa in aayadda in ka hadlaa sarakicidda ah, oo waa sarakicidda kowaad. Haddaba, waxaan ku arki kartaa in, iyo waxaa jira hadlo sarakicidda Shuhadada fitnada ka dib. Laakiin waxaa loola jeedaa si sarakicidda kowaad oo kaliya ka kooban yahay Shuhadada ka dhib? No, dabcan ma.
D sarakicidda kowaad waa badan oo ku saabsan nooca nooca sarakicidda waa. Waxaan ku arki kartaa in ay jiraan laba nooc oo sarakicista. The ugu horeysay ee nolosha weligeed ah la leh Ilaah, iyo sarakicidda kuwii labaad ee daa'in ah Ilaah aan. Qiyaame dambe, taas oo ah isa-soociddiisa weligeed ah ee xagga Ilaah ka, oo ka kooban dhammaan ood goynaysaan dhintay ka dhan xilliyada, iyo meel ka dib 1000 sano ee Empire. (Rev 20: 5)
sarakicidda kowaad oo waa loo siman yahay si nolosha weligeed ah oo Ilaah ka dhacaan marxaladood oo kala duwan. Axdiga Cusub, oo aan ku aragno dhawr sarakicista kala duwan oo dhammu way iman ee hoos yaala qaybta "sarakicidda kowaad".
sarakicidda 1. Ciise maalintii saddexaad. Ciise badbaado xanuun waa sababta kooxda for caadi oo dhan. Haddii uusan soo heshii dembi ciidankii oo dhan ku dhowaad 2000 sano ka hor, ma waxaan lahaa, Sarakicidda kuwii dhintay ka soo sara. sarakicidda Ciise waa sarakicidda.
2. sarakicidda ee dadka qaar ee luugaysku Testament tid.- Hebrews 11:35
Kuwa mu'miniinta ah ka luugaysku Testament 3-dii ka dhacay xiriir la leh Ciise dhimashadiisa iyo sarakicidda. Matt 27: 52-53
rayrayn 4aad final ka hor Christian Golaha The iyo 70 toddobaadka of sano Israa'iil iyo reer Yeruusaalem.
5. sarakicidda kuwii ayaa ka mid ah laba markhaati dhamaadka dhibta - Up 11:12
6. Qiyaame oo ka mid ah Mu'miniinta iyo luugaysku Testament iyo Shuhadada dhibaatadii, taas oo qaadataa meel wax yar ka hor dib u soo celinta ee boqortooyada reer binu Israa'iil. - Dan 12:13, John 11:24, Up 20: 4
M uumiga dhacdooyinka in dhacaan inta lagu guda jiro fitnada iyo in xiriirka ay la soo laabashada Ciise na tusaysaa in ay tahay lagama maarmaan u ah farqiga u dhexeeya temporal rayrayn Assembly, oo Ciise laabto arki karo. Qaar ka mid ah dhacdooyinka soo jeedinaysaa in ay tani tahay:
kursiga xukumaadda ee Masiix
2 Corinthians 5:10 - Waayo, annagu waa dhan ka hor inta kursiga xukumaadda ee Masiix ka muuqan, in qof kastaa helo wixii uu sameeyey nolosha adduun, xumaan iyo wanaag toona
G uds erayga wuxuu na barayaa in maalin maalmaha ka mid dhan oo naga mid ah ka hor inta kursiga xukumaadda ee Masiix ku taagan doonaa oo waxaan ka dhigi räkenskab for Camalkanaga yaan leenahay. Maxkamad in uu yahay waayo furtay iyo in aan lagu khaldin xukunka at carshiga cad weyn ka dib 1000 sano ee Empire. Erayga Giriigga ah ee maxkamadda waa "Bema", yahay, sidaa daraadeedna loo yaqaan "Beema xukun".
1 Korintos 4: 5 - Hoose sidaas daraaddeed garsooridda ma Dhicis, ka hor inta Rabbigu u imanayso. Waa in uu iftiimin sidii qariya gudcurka oo muujin doona qalbigayga ka fikirrada iyo, ka dibna mid kasta waxay lahaan doonaan ammaantiisa Ilaah
maxkamadda waxay qaadataa galay si deg deg ah ku xidhan upprycklsen, taas oo macnaheedu yahay in marka Golaha la Masiix ku noqdaa dhulkiisii, waxay durba ka hor inta kursiga xukumaadda ee Masiix abaalgudkooda la modtaga.
N Ågot sida bekräfter in maxkamadda this ka dhacay deg deg ah ay u xir ilaa rayrayn waa 24 oday, oo wakiil ka ah Golaha xoog buuxa. Waxay yihiin meel carshiga Ilaah ku wareegsan, koron ah ee madaxa, oo diyaar u ah inay u adeegaan Rabbiga inta lagu guda jiro fitnada, ka hor in Ciise jebiyo shaabadda ugu horeeyay ee Revelation cutubka 6aad
Haddii 24 oday oo wakiil ka ah shirka, waxaa loola jeedaa laba wax. Oo wakhti loo baahan yahay ee u dhexeeya rayrayn iyo bilowgii 70aad ee årsveckans, iyo ka hor xukunka hore iyo ka hor inta faras ugu horeysay lagu soo furan doonaa, shirka horeba waa in meel jannada.
xukunka iyo quruumaha iyo dadka aan Yuhuudda ahayn
D Fidneeyey aan Yuhuudda ahayn waxay noqon lahayd wax aan macquul aheyn haddii Jirin farqiga u dhexeeya temporal rayrayn iyo Ciise laabto arki karo. Sidee kale oo labada badbaadeen iyo unsaved, kuwaas oo weli meydadka dabiiciga ah oo ay la kala saari karaan haddii aaminka ah ayaa hore u la rujiyay iyo jeestay ammaanta meydadka?
Haddii rayrayn dhacaya dhibaatadii ka dib si fudud u heli jirin baahi loo qabo in dadka kala qaybin ka hor Millennium. Waxaan hore u heli lahaayeen uppdelining ah oo xidhiidh la leh rayrayn markuu Ciise cag on Buur Saytuun.
Population of Millennium
M adku waxay yihiin kuwa badbaadayaa inta lagu guda jiro fitnada tegi doonaa jidhkooda dabiiciga ah ee Millennium. Dadkani waxay ka shaqeyn doonaan, guryo la dhiso oo ay leeyihiin carruurta. Inta aynaan u gelin Millennium, waxaa mar kale jiri doona dad badan oo dhulka, ka duwan dhammaadka dhibaatadii, marka Aadanahu ahaan doonaa wax dhif ah ka badan ah dahabkii Oofir? (Ma 13: 9-12)
mustaqbalka Israa'iil ee
In jir ah, halkaas oo, Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn u noqday jidh keliya loo baahan yahay farqiga waqti Rabbiga u ah in ay sii wadaan barnaamijka la Israa'iil. toddobaadka 70aad iyo final of sano waa markii ugu markii Rabbigu doonaa, oo haddana ay diiradda on Yuhuudda iyo dalka Israel.
dhamaadka församlingenstid dhulka dhameystiraya ma aha oo kaliya waxsii kitaabiga ah, laakiin sidoo kale hadal of farqiga loo baahan yahay ee u dhexeeya rayrayn iyo Ciise laabto arki karo. Labada kursiga xukumaadda ee Masiix, 24 odayaasha, xukunka quruumaha, dadka oo ka mid ah Millennium iyo barnaamijka Rabbiga, waayo, reer binu Israa'iil waa, iyo this soo jeedin.
V ee ku nool waqti of sugitaanka. Dhanka kale, iyo filanayeen in Rabbiga dhawaan noo guriga u yeedhay. Waxaan arrin adag in aan la aaminsan yahay in aynu nahay jiilka doortay in ay leeyihiin doonaa nimcada in ay la kulmaan qabow, buun Rabbiga oo jannada iyo oohin malaa'ig ahay.
Shirka helay ay bilowday at Ilaah xilkani Ruuxa maalintii Bentakostiga, iyo rayrayn shirka uu ku dhamaan doono. Waxaa la joogaa waqtigii sare si ay madaxa naga kor, waayo dhakhsaha badan u dhowaanin na badbaadi.
Waxaa jira si fudud ma aayadaha Axdiga Hore ama Axdiga Cusub soo jeedinaya in kaniisadda iyada oo muddo dhib ku tegi doono, ama in kaniisadda waa taagnaan fool ka fool ka gees ka gees ah.
Dhibaatada waxaa la dhahaa "dhibkii dadka Yacquub" (Jer30: 7), laakiin marna loo yaqaan "shirka ama kaniisadda cidhiidhi ah".
malaa'ig Jibriil Daanyeel ku andacooday in ay 70 todobaad ayaa dadkaaga (Yuhuudda) dadkaaga iyo magaaladaada quduuska ah (Jerusalem) korkiisa oo goostay. waxaa kiniisadda aan halkan ku xusan. Dan 9:24
Kaniisadda lahaa qayb ka jirin ee 69 toddobaad ee ugu horreeya, oo aan qayb ka mid ah la soo dhaafay iyo toddobaadka 70aad noqon doonaa.
rayrayn Revelation dhacdaa Cutubka 4: 1 kuwaas oo muddo dhib ku sifeeyeen Cutubka 6-19. 24 oday oo wakiil ka ah shirka waa in ka hor shaabadda koowaad waxaa la jebiyey.
kaniisadda ayaa waxa lagu sheegay labaatan jeer in saddexda cutub ee ugu horreeyaana Muujintii, laakiin marna ku xusan inta u dhaxaysa cutubyada 4 iyo 19.
muddada Dhibaatada waxaa kaloo loo yaqaan a "maalinta cadhada" (Zeph 1:15) ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin Ciise ma na doorataan xanuunsado cadho. (1 Th 5: 9), laakiin waa inaga samatabbixiyey "cadho" (1 Th 1:10)
muddada Dhibaatada waxaa la yiraahdaa maalinta Rabbiga ee Kitaabka Quduuska ah (Zeph 1:15). Laakiin 1 Tesaloniika 5: 2-3 ayaa sheegay in maalinta Rabbigu ah (dhib ah) u iman doontaa sida tuug habeen ah. Marka dadka (gaalada) waxay dhihi, "Nabadda iyo ammaanka," ka dibna ku dhufatey (gaalada), ayaa la baabbi'iyey sidii si lama filaan ah sida xanuun ku yimaado guud ahaan dumar ah oo uur leh, oo iyagu (gaalada) ma baxsan doono. Waxaa cad in dhibta waa wax dhici gaalada, laakiin ma aha mid ka mid ah aaminka ah oo la badbaadiyey.
Waxaan tacsiyeeyaan doonaa mid kasta oo kale oo la hadal of rayrayn (1 Tesaloniika 4:18). Ma jiro raaxada ee baridda in ayaa sheegay in kaniisadda tegi doonaa iyada oo qayb ka mid ah ama dhammaan domstid fitnada.
Ciise ballan qaaday kaniisadda Philadelphia in uu doonayo in loo ilaalin lahaa kaniisadda, iyo "idinka badbaadin baxay saacadda jirrabaadda oo, taas oo dunida oo dhan iman doonaan, oo dadka ay imtixaanka keenaan." (Muujintii 3:10) Eebe wuxuu u yaboohay si loo ilaaliyo shirka aamin baxay muddo fitnada .
Sida Enoogna waxaa kor loogu qaaday samada daadka hortiisa iyo Nuux waxaa la ilaashaa, iyada oo loo marayo daad, Golaha la kor ka hor inta dhibaatada iyo Israa'iil haraaga ah ha la wada ilaaliyo iyada oo dhibaatadii.
In si la mid ah in Ilaah ma laga yaabaa xukumi Sodom iyo Gomora hor Luud laga fogeeyey magaaladii ahayd, Ilaah dunida this ma xukumi karaan ka hor inta xaqa ka dhammaatay. (1 Gen. 19:16)
Ciise wuxuu ka hadlayay xilliga fitnada markii uu weydiiyay: ". Vaka had iyo tukadaan xoog in ay ka baxsadaan waxaas oo dhan in ay yimaadaan oo ay u Wiilka Aadanaha isu hor taagtaan" (Luukos 21:36) Waxaa macno lahayn in Ciise ku weydiiyo wax uu uusan dooneynin in uu sii.
Malaakii 3:18 Rabbigu wuxuu leeyahay (yimaadaan) noo tusi doonaa faraqa u dhexeeya kan xaqa ah iyo kan sharka ah, inta u dhaxaysa hal kan Ilaah u adeega iyo isaga oo aan u adeegaya. Pre-trib aaminsan yihiin in Rabbigu u imanayso in ay soo ururiyaan uu shirka, ka dibna waxaan ku yimaado isaga u dhaxaysa kan xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn xukumo.
At-qaadida, Ciise yimaado waayo kaniisaddiisa (1 Tesaloniika 4: 16-17) markuu yimaado dhamaadka fitnada, isagu waa u imanayaa iyadoo uu shirka. (1 Th 3:13).
In xarfaha toddobada kiniisadood in Ciise martiqaaday in ay "maqlo waxa Ruuxu ku leeyahay shirka." Laakiin in dhibaatadii weynayd, ka dib markii in Ruuxa Quduuska ah ee kaniisadda waa in dhinac fadhiistay, ayuu ku yidhi: "Kan dhego wax, ha maqlo" (Muujintii 13: 9) wuxuu ka tegayaa Golaha, halkaas oo ah kiniisadda lahayn inay dhegaystaan ​​Ruuxa ku hadla oo in ay dhex maraan fitnada.
Ka gees ah ka dhigi doonaa kula dagaallamo quduusiinta, iyo awood u leeyihiin in ay iyaga laga adkaado. (Rev 13: 7). Laakiin ma noqon karto, ehelkeedu waa lagaga hadlay halkan. Ciise qudhiisa ayaa balan qaaday in uu "dekedaha helvets waa inaanu ahaan shirka kuwa xoogga badan." (Matayos 16:18)
D sarakicidda kowaad Muujintii 20: 4 sidoo kale waa wax in uu ahaa mid dood badan oo hore iyo dib, oo waxaan u malaynayaa in ereyga Kitaabka Quduuska ah ku hadlo isu marka aan ku akhriyey. Waxaan ku arki kartaa in aayadda in ka hadlaa sarakicidda ah, oo waa sarakicidda kowaad. Haddaba, waxaan ku arki kartaa in, iyo waxaa jira hadlo sarakicidda Shuhadada fitnada ka dib. Laakiin waxaa loola jeedaa si sarakicidda kowaad oo kaliya ka kooban yahay Shuhadada ka dhib? No, dabcan ma.
sarakicidda Ciise maalintii saddexaad. Ciise badbaado xanuun waa sababta kooxda for caadi oo dhan. Haddii uusan soo heshii dembi ciidankii oo dhan ku dhowaad 2000 sano ka hor, ma waxaan lahaa, Sarakicidda kuwii dhintay ka soo sara. sarakicidda Ciise waa sarakicidda.
sarakicidda kuwii dadka qaar in luugaysku Testament tid.- Heb 11:35 Kuwa mu'miniinta ah ka luugaysku Testament dhacay oo xidhiidh la Ciise dhimashadiisa iyo sarakicidda. Mat 27: 52-53
The rayrayn Assembly Christian final ka hor iyo 70 toddobaadka of sano Israa'iil iyo reer Yeruusaalem.
Sarakicidda kuwii dhintay ayaa ka mid ah laba markhaati dhamaadka dhibta - Up 11:12
Qiyaame oo ka mid ah Mu'miniinta iyo luugaysku Testament iyo Shuhadada dhibaatadii, taas oo qaadataa meel wax yar ka hor dib u soo celinta ee boqortooyada reer binu Israa'iil. - Dan 12:13, John 11:24, Up 20: 4
D et Tani waa qayb ka mid ah afar ee taxanahan - laabashada Ciise ka hor fitnada, taasoo aan horey u qoran posts socda:
Counterarguments og arrimaha
E ne of arrimaha in waxaa inta badan looga hadlay marka aan ka hadlo cilmiga Pre-trib - in rayrayn shirka horteeda dhib ama todobaadkii la soo dhaafay of sano - waa taariikhda qayb Pre-tribs tan iyo sheegidda Margeret McDonald caan ka ah 1800 taas oo saamaysay John Somali in uu fiqiga.
Labada dhibcood Waxaan qabaa waa u xiiso badan sababtoo ah waxa ay inta badan isticmaalaan sida dood counter ah marka aan ka hadlo cilmiga Pre-trib, kaas oo markaas soo bandhigay sida cilmiga cusub, oo aan horey loo baray by taariikhda kaniisadda. post Tani waxay qaadaan ku salaysnaan doonaa, kuwaas oo diidmo iyo su'aalo.
The ugu caansan counter-dood
E ne of argment ugu badan cilmiga Pre-trib sidaas waa "waa cilmiga aad u cusub oo loogu talagalay in ay noqoto mid macquul ah." Laakiin waxaa jira dhibaatooyin dhowr ah, iyadoo ku doodaysa this. marka hore waa in ay iska dhega xaqiiqda ah in Kitaabka Quduuska ah barayaa in fahamka ugu dambaysta waxsii waqti aan la aqoonsan ama shaaca ka qaaday, markii in dhacdooyinkan saadaaliyay qaadan ka hor.
Daniel Marka helay waxsii qaarkood in bandhigno dhammaadka wakhtiga, waxa uu ku jawaabay in Rabbiga inuu wax uusan iyaga fahmaan. Rabbiga Daanyeelna waa jawaabay in ", erayadanu waa inay ku sii qarsoon oo la shaabadeeyey ilaa dhamaadka waqtiga." (Daanyeel 12: 9)
fahamka hadalka nebiyadii
N waa si kale loo dhigo, aynu aragno erayga Rabbiga dhammaado marka la eego wax sii sheegidda kitaabiga ah, sidaas darteed waxaan sidoo kale ka heli faham habboon ee hadalka nebiyadii.
Ma aha la yaab leh in taariikhda kaniisadda ayaa su'aalo ku saabsan wax sii sheegidda ee Ezekiel 48, taasi oo ka hadlaysa of Juuj amiirkii maalin maalmaha ka mid weerari doonaan Israa'iil la isbahaysiga ka mid ah dalalka Muslim. Waayo, dhowr kun oo sano, Israa'iil ma jirin, iyo wax sii sheegidda a in uu ka hadlayaa weerar lagu qaaday dalka a in aanu jirin wareer, waxa uu abuuray.
waxsii kale ku xiran yihiin labada taariikhda laakiin sidoo kale horumarinta farsamada in aan ku soo maray qarniyo soo dhaafay, wax ay ahayd in ay wax qarsoon in ay dadka ka hor ku noolaa. Sidee mid sharxi kara laba markhaati Muujintii cutubka 11, halkaas oo labada ay dhimashada iyo sarakicista, la soo Joogsan by dunida oo dhan? Ama sanamkii bahalka in yimaado oo noolnool oo ku hadla erayo faan?
doonaa Waxaan in si kale loo dhigo, si ay u leeyihiin waxgarasho saxda ah ee hadalka nebiyadii sida aynu u dhowaan markii ay dhamaystirka.
Spiritualising wax sii sheegidda Bible
D xaqiiqda et in qaybo ka mid ah hadalka nebiyadii ayaa maqan iyo adag tahay in la fasiro ilaa aan ka arko ay dhamaystirka, waa wax ayaa lagu gartaa badan ee taariikhda kaniisadda.
In ka CE sanadkii 430. Qoray taxane buugga aabbihiis kaniisad Augustine ee "City of Ilaah", kaas oo waxaa loo arkaa mid ka mid ah uu ugu muhiimsan iyo inflytelsesrika shaqeeya. wax sii sheegidda Augustine spiritualized Bible iyo ku dooday in Millennium (Millennium) mar horeba bilaabay oo ay sii wadi doonto ilaa Ciise socda labaad.
Waxsii kitaabiga ah lahaa, in si kale loo dhigo si aan la fahmi karaa ama fasiro macno ahaan. Waxay ahayd spiritualization this of waxsii kitaabiga ah in ay ahaayeen si ay u xusaan taariikha kaniisadda iyo sida ay u iyaga förtolkade ku xiga kun oo sano.
Aabbayaashii kaniisaddii hore
M mid ka hor inta aan helay a "saarka" wax sii sheegidda kitaabiga ah halkaas oo mar kale waxaan bilaabay in ay arkaan iyo iyaga oo macno ahaan u fasiro, haddana waxay muujinaysaa taariikhda kaniisadda in lagu daro Rasuullada, sidaas oo kale ayaa Aabbayaashow hore ee blocks dhismaha ka mid ah waxbarashada, taas oo ku salaysan cilmiga pre-trib ah . Waxaa kaloo xaqiiqo ah in ku dhowaad dhammaan qolooyinka kaniisaddii hore wacdiyey premillennialism.
Justin Martyr (sidoo kale loo yaqaan Justin, Philosopher 110-165 e.Kr) oo aad buu u caawiyey in ay habeeyaan fiqiga ee Church ee, xataa tegey ilaa iyo haatan in uu soo jeediyay in haddii ay jirto cid wax ku wacdiyey kale, waxa uu ahaa heretic ah. (1)
soo saarka A wax sii sheegidda kitaabiga ah
E raacay sannado badan oo gudcur ruuxiga ah ee qarniyadii dhexe ee Yurub ee aan ka helnay toobad, iyo si tartiib tartiib ah waxaan bilaabay in ay arkaan saarka wax sii sheegidda kitaabiga ah meesha förtolkningen ahaa suugaan.
Tani "nooleenta" si dhab ah dhexdooda Puritans bilaabay, dhaqdhaqaaq reformatory baxay ee England ku wareegsan 1560s, kaas oo si deg deg ah keentay in fahamka rayrayn ahayd dhacdo oo kala duwan ka soo Ciise arki karo inay yimaadaan.
hoggaamiyayaashooda "Kordhi Mather" kaas oo ahaa kaniisad Puritan, Cumaan iyo aqoonyahan, kuwaas oo saamayn weyn ku ah nolosha ruuxiga ah ee Massachusetts ku dooday in Saints ayaa la "dhexda u galay samada in ay ka baxsadaan marinka ugu dambeeyey ee dabka". (2)
horumarinta A taariikhiga ah
F n si ay ku doodeen in cilmiga Pre-trib waa "waxbariddan cusub" oo ku salaysan oo keliya on waxbaridda John Somali ee, kuwa soo socda waa horumar taariikhi ah la utplock a war by Aabbayaashow Church iyo dadka, kuwaasoo muujiyay fikirrada Pre-trib Markuu wax barayay by taariikhda kaniisadda.
Taas macnaheedu waa in marka dadku ay sheegayaan in soo laabashada Ciise ka hor fitnada, ama in cilmiga cilmiga Pre-trib aan wacdiyey ka hor 1800, waxaa si fudud run ma aha. Si ay u muujiyaan in waxbariddan jirey muddo dheer ka hor John Somali, halkan yihiin oo kaliya dhowr tusaale oo ka mid ah dadka iyo aabbayaasha kaniisada oo ku hadlay afkaartaan ah:
Warqadda Koobaad ee Clement, 23, waxaa ku qornaa ku wareegsan sanadkii 96 CD - laga yaabo in Clement sida Filiboy 4: 3 waxa ay tilmaamaysaa sida hogaamiye ee kaniisadda Rooma. " Sida runta ah, ugu dhakhsaha badan oo lama filaan ah waa inuu dhammaado doonaa , sida Qorniinku Sidoo kale wuu markhaati furaa oo wuxuu ku yidhi," Seedily iman doonaa, oo ma aanay sii joogi doonaa ", iyo" Rabbigu wuxuu si lama filaan ah u iman doonaan inay macbudkiisa, xataa Kan Quduuska ah, waayo, Kumaad eegto ".
In Warqadda labaad ee Clement, waxaan ka akhrisan: " aynu saacad kasta Filo boqortooyada Ilaah ee jacaylka iyo xaqnimo, maxaa yeelay garan mayno maalinta Rabbiga u muuqday ."
Irenaeus 130-202 AD - qoray in uu khuseeya "Against Heresies 5:29 -" Oo waxaa ka hor, marka in dhamaadka Church ee laga si lama filaan ah kor loogu qaaday tan, waxa la sheegay, "Waxaa jiri doona dhib sida mid aan jirin tan iyo bilowgii, hana waydiin doonaa" .
The Didache, 70-180 AD - Chapter 16, Qaybta 1aad: Iska feejignaadaan badan noloshaada, ha laambadihii ma lagu demin, ama dhexda ku ungired, laakiin waxaa la diyaarin, idiin ma oga saac ee kuwee Eebow iman doonaa. "
Tertullian 155-245 AD - Laakiin waxa lanooga yahay in si degdeg ah u dhowaanin-dhalashada Rabbigeenna !, Haatan ay leedahay oo dhan, hadda aad buu u sarraysiiyey, oo hadda ka mid ah guul "
Cyprian, 200-258 AD, ku qoray soo socda ee "Treatises of Cyprian", taas oo uu ku sharaxay jeer dhamaadka iyo dhibaatadii weynayd: "Ha ku siin Ilaah ugu mahad, ma aad naftaada hambalyeeyo, Taasi by bixitaanka hore aad kaxaysay , oo ka samatabbixiyey ku hafteen oo musiibo Taasi waa dhow ? Ha noo soo salaamayaan maalinta kuwee meelaynayaa kasta oo inaga mid ah ayaa gurigiisii u, Kuwaasoo dafo noo hense, oo lacag la'aan ah dabinnada dunida naga dhigay.
Shepherd ee Hermaas (Shafay 140 AD) wuxuu ahaa qoraa Christian kuwaas oo lagu tirinaya inuu mid ka mid ah Aabbayaashow Rasuullada. Waxa uu ku qoray socota ee ku saabsan dhibaatadii weynayd: " Haddii aad The Hadda diyaariya, oo toobad keen oo aad qalbigiinna oo dhan oo u soo jeesan Rabbiga, waxa ay noqon doontaa suurto gal ah in aad u baxsadaan " (6)
Victorinus (si fiican u yaqaan in sannadkii 270 AD oo ku dhintay 303 AD) qoray faallooyin ku saabsan kitaabka Muujintii, oo qoray socota ee ku saabsan Up 6:14 - "Oo Samadu la Drew sida qorniin duudduuban oo waxaa kor u soo giringiriyey. Waayo, samada waa la giringiriyey, Taasi Church ee looga qaadi doonaa. "Oo buur kasta, iyo gasiiradaha ha ka saaro fromtheir meelaha saaxiib Taasi In Cadaadiska The Last oo dhan laakiin tegey fromtheir meelaha; in uu yahay, Si wanaagsan ayaa la saari doonaa, oo doonaya in ay ka fogaadaan Cadaadiska.
· Ephrem Suuriya (306-373 AD) - " Wixii oo dhan Saints oo la doortay Ilaah la ururiyey, ka hor inta Dhibaatada Taasi waa inuu yimaado, oo la qaado si loo Rabbiga , waaba intaasoo Waxay u arkaan wareer Taasi micnaheedu waa in Askar ka World dembigayaga aawadiis "(On Last Times ee, ka gees ah, iyo End of aduunka, ee Ephrem Syria, 373 AD (7)
John Calvin - reformer kaniisad ku noolaa 1500s ah. " Diyaar u noqo isaga filan maalin kasta, ama halkii daqiiqad kasta " "Sida uu balan qaaday in uu soo laaban doonaa noo NTO, waxaan ku waajib in ay qabtaan nafteena diyaar, at daqiiqad kasta in ay isaga revieve." "Maanta waa in aan heegan inay haleelaan laabashada Masiixa. "
Martin Luther hadlay sida soo socota: " Waxaan aaminsanahay in calaamada oo dhan, Kuwaasoo waa in hormaraan maalmaha ugu dambeeya havealready muuqday. Ha na ha u malayn in Imaatinka Masiix yahay fog ; Ha noo eegto la Madaxda kor loo qaado, aynu ka filan Bixiyahayaga ee la taag iyo maskaxda ku faraxsan soo socda. "
In uu buugga, "Garashada End Times Sheegidda, marsiiyey Paul N. Benware, waxaa jiray kuwo badan oo ah 1600 iyo 1700, kuwaas oo bilaabay barayay rayrayn waa in laga Ciise laabto arki karo oo kala duwan. (3)
Peter Jurie, baray in uu buugga "dhowaaday u samatabbixiyaa kiniisadda" in 1687 in Masiixu iman lahaa hawada inay sabuulladii jartaan quduusiinta oo dhan oo ku soo celi samada Armageddoon ka hor. Waxa uu ka hadlay rayrayn qarsoodi ah ka hor inta Rabbiga ah sharafta iyo awood socda.
Labada Philip Doddridge iyo comments John Gill ayaa NT (1738 iyo 1748) iyadoo la isticmaalayo marka la eego in rayrayn iyo Rabbiga ku noqon imminenta.
Hogaamiyaha Babtist A Morgan Edwards, kii u dhashay oo waxay u adeegeen in Wales ka hor inta uusan Maraykanka ee 1761. In 1740 in siiyey hadal Morgan oo fikirrada Pre-trib sidii ayuu wax ku baray eschatology.
James McKnight (1763) iyo Thomas Scott (1792) baray in kan xaqa ah waa la qaadi lahaa xagga samada, halkaas oo ay ku noqon laheyd in ammaanka ilaa xukunka Ilaah oo ahaa reer (9)
John Somali - 1800-1882
J ohn Somali ku dhashay London, oo ahaa mid ka mid ah kuwaas oo doonayay in saameyn weyn cilmiga pre-trib, sidii uu si nidaamsan u saaray isla ka dib markii uu bartay maadada.
Somali gabagabeeyey in ay jiraan waa in ay ahaadaan cad u kala soocnaadaan Israa'iil iyo Kaniisadda, oo wuxuu noqday qanacsanahay soo laabashada Ciise imminenta ', taas oo macnaheedu yahay in Rabbigu waxay u iman karo dib mar kasta, iyada oo aan qaar ka mid ah jilayaasha magac uyaalka. In 1827, uu horumariyo mabaadii asaasi ah in sifaha lahaa nidaam fiqi ahaaneed ee cusub loo yaqaan "dispensationalism".
Margeret MacDonald ee wax sii sheegidda
N Ågot muhiim ah in la taabto, iyo in uu ahaa mid dastuurka ka mid ah dood badan iyo faham daahid, si hufan waa wax sii sheegidda Margeret MacDonald ee waxaa loo arkaa inay wixii qaabeeya cilmiga Somali iyo fiqiga. Fikradda ayaa waxaa hore u sameeyaa 70s ah by Dave Macpherson in "The la rumaysan karin Pre-Trib Asal 1973 (5)
Dave Macpherson lahaa fikradaha in lagu gartaa badan oo muran waa in Dastuurka ee cilmiga Pre-trib waa been.
Margeret, ka dibna 15-sano jir ah, ayaa ka qaybqaatay lahaa shir salaadda burjiga in Scotland - in 1830. Waxaa, ayay wax sii sheegeen lahaa oo la siiyo wax sii sheegidda a kaas oo shaaca ka qaaday in rayrayn qaadan lahaa meel ka hor fitnada.
J links ag this sii sheegidda ee guud ahaanteed si adiga laftaada ayaa sidaas xukumi kara. Nasiib darro, qoraalka aan la turjumey af Iswiidhish:
Halkan waa hoostana aad ka sii sheegidda oo aan muujiyey qoraal in xiiso leh:
" In arkay Dadka of Good galay xaalad idishay khatar ah, oo colal ku shabagyadoodii iyo entanglements, oo ku saabsan in la isku dayey, iyo dad badan oo ku saabsan in la khiyaaneeyey iyo xaaladaha. Hadda kuwa sharka leh waxaa la muujin doonaa, isagoo leh xoog iyo calaamooyin iyo cajaa'ibyo been ah oo dhan, si haddii u suurtowdo la doortay oo aad u waa la khiyaanayn doonaa. - Tani waa jirrabaadda dabka Waa kuwee waa in ay na isku day. - Waxay noqon doontaa, waayo, safeeyey oo daahirinta, oo ka mid ah xubnaha dhabta ah ee jidhka Ciise; laakiin Oh Waxa ay noqon doontaa tijaabo ah oo ololaysa. Naf kastaa waa la gariirin doonaa xarunta aad. Oo cadowgii wuxuu isku dayi doonaa inuu gacan kor u wax kasta oo aan rumeeyey - Laakiin jirrabaadda kuwa aan rumaysadka dhabta ah waxaa laga heli doonaa si sharaf iyo mahad iyo ammaan. Wax laakiin waxa Ilaah u taagnaan doontaa. maqla oo dhagax-dhulka ayaa lagu sameyn doonaa cad - jacaylka badan oo qabow wax doonista aan si joogto ah saidthat habeenkii, oo ay fashiliyaan tan, hadda hortiisa xun Masiixa been ah lagu arki doonaa dhulka this. oo waxba laakiin Masiix nool na in lagu ogaan karaa this day xun cadowga inuu ku khiyaaneeyo - ama waa khiyaanada xaqdarrada oo dhan samayn doono - uu willhave a-xisbiga counter qayb kasta oo runta Ilaah iyo iska yeelyeel ah loogu diyaariyey shuqul kasta oo ka mid ah Ruuxa. Ruuxa waa iyo u daadan doonaa on Church, Taasi Waxay in lagu daahiriyaa May iyo buuxsamay Ilaah - oo kaliya in saamiga sida Ruuxa Ilaah ka shaqeeya,
Tani waa gaar ahaan nooca maxkamadda, iyada oo kuwee kuwa ku jira noqotay yaa lagu tirin doonaa wax istaahila in Wiilka Aadanaha isu hor taagtaan. Waxaa jiri doona tijaabo ka muuqataana, sidoo kale, laakiin 'Mabda'iyan TIS jirrabaadda. Waxaa la keenay by xilkani Ruuxa, oo xaq u kordhi doonaa in saamiga sidii Ruuxu waa u daadatay. Maxkamad of Church waa ka gees ah. Waa by iyagoo ay ka buuxaan Ruuxa Inaan lagu hayn doonaa. xigasho End.
Diidmo iyo counterarguments
O m aad fahmi karto macnaha wax sii sheegidda this, waxaad garan doontaa in ay tahay counterarguments arrin cad oo ku saabsan wax sii sheegidda this ka Margeret, iyo jidkii waxa ay saamayn ku lahaa fiqiga John Somali ee:
Marka hore, waxaa jira farqi ka dhex jira ee wax sii sheegidda iyo buugaag hore John Somali ee. wax sii sheegidda yimid sannaddii 1830, laakiin mar hore dhawr sano ka hor, Somali qoray buugaag ku saabsan rayrayn hore ka hor inta fitnada. Waxaa sidaas wax aan macquul aheyn in Somali lagu midab lahaa by sii sheegidda this waa.
Dhibaatada dab daahirinta
F dhegta Marka labaad, waa walaxda aad wax sii sheegidda oo ka dhigaya wax aan macquul ahayn. Haddii aad rabto, waxaan ka akhrisan karaan oo fahmi karaan waxa ku qoran, ka dibna waxba kuma jiraan wax sii sheegidda oo muujinaya in Margeret uma aan malaynaynin ama wax sii sheegeen fasiraadda a pre-trib. Margeret "wax ka sii sheeg" oo ay ku jiraan waxyaabaha soo socda:
"Tani waa jirrabaadda dabka Waa kuwee waa in ay na isku day. - Waxay noqon doontaa, waayo, safeeyey oo daahirinta, oo ka mid ah xubnaha dhabta ah ee jidhka Ciise; laakiin Oh Waxa ay noqon doontaa tijaabo ah oo ololaysa
Tani waa gaar ahaan nooca maxkamadda, iyada oo kuwee kuwa ku jira noqotay yaa lagu tirin doonaa wax istaahila in Wiilka Aadanaha isu hor taagtaan.
Maxkamad of Church waa ka gees ah. Waa by iyagoo ay ka buuxaan Ruuxa Inaan lagu hayn doonaa "
Marka Margeret qoray in dhib, ama waqti tijaabo waa si aad u nadiifiso shirka, iyo Golaha fitnada yeelan doonaan in ay dhex maraan ka gees ah iman lahaa, ka dibna, waxba ma aha, laakiin fikirrada post-trib cad in aan waxba loo soo Celin Ciise leeyihiin ka hor fitnada in la sameeyo.
Mar saddexaad, wax sii sheegidda run ahaantii la xiriira. Waxaa muhiim ah in arrintan ay tahay in cilmiga waa Kitaabka Qudduuska ah ama aan, oo ay tahay, in si kale loo dhigo ereyga Ilaah si ay u go'aamiyaan.
Kor waa "dhow" ama la xiriira
1 Tesaloniika 1:10 - iyo inay sugtaan Wiilkiisa uu ka yimid xagga jannada, kuwii dhintay ka soo Ilaah ka sara kiciyey, Ciise ayaa naga samatabbixiyey cadhada imanaysa.
E ne of qaybta ugu muhiimsan marka aan ka hadlo rayrayn, waa in ay tahay "dhow," taas oo macnaheedu yahay waxaa la xiriira, iyo wax aad ka fili lahayd inay dhacaan wakhti kasta.
macnaha erayga "dhow" waa "tayada ama xaalad ah inay noqoto mid ku saabsan in ay dhacaan" - Dhacdada ama xaalad ku saabsan in ay dhacaan waa. Sidaas marka aan ka hadlo Rabbiga "imminenta" ama soo laabtay la xiriira oo xidhiidh la leh waxsii dhammaadka wakhtiga, sidaa daraadeed waxa si fudud waxaa loola jeedaa in soo laabashada Ciise shirka arki karaa wakhti kasta, iyada oo aan wax characters magac uyaalka.
Erayga "sugaan" in this aayadda Bible loo tarjumay ka erayga "anamenein" taas oo macnaheedu yahay "in ay sugto qof si ay u yimaadaan." Waxa ay muujinaysaa in habdhaqanka "firfircoon" iyo kaalinta qofka sugaya.
Kor - dhacdo sixiixin
D et jidka kaliya in ay rayrayn shirka waxay noqon kartaa "dhow" iyo sixiixin, waa in waa in ay qaataan ka hor dhib ama todobaadkii la soo dhaafay of sano. In si kale loo dhigo, ma calaamadaha nebiyada in hormaraan rayrayn, ama wax Golaha waa inuu ogaadaa dhici doona ka hor in dhacdadan qaadan kartaa meel.
Haddii kiniisadda oo sugi lahaa calaamad qaar ka mid ah, sidaas darteed waxaa jira ma noqon doono, ama u noqon baahi loo qabo in "si joogto ah sug soo laabtay Rabbiga."
T xanuunsan duwan rayrayn waa Ciise laabto arki karo waa "dhow", ka dibna waa in qaar ka mid ah caddayn ama dhacdooyinka ka hor Ciise, cagahoodu waxay u gelin karaa on Buur Saytuun.
First, Israa'iil waa in ay ahaadaan ku soo laabtay dalkooda. Ka gees ah waa in ay timaantay, oo waxaan u leeyihiin in ay la kulmaan baas oo hallaynta ah, iyo bahalka. Labada nebiyada waa in sidoo kale weerarka iyo wax ka sii sheeg yimaadaan inta lagu guda jiro 3.5 sano, xukun iyo cadhada Ilaah waa in lagu shubtay dhulka ku dul. Ugu dambeyntii, oo quruun waluba waa ka soo horjeesta Israa'iil, oo waxaan ka heli doonaa sida Kitaabka Quduuska ah oo ku baaqay in Armageddoon.
la'aanta ah ee erayo taageeraya
D et in muhiim ah marka aan ka hadlo rayrayn Assembly, waa in aad si fudud u leeyihiin in ay tirtirto la'aanta guud ee la heli karo erayo taageeraya, ballanka nolosha weligeed ah kuwa u samray iyo siin noloshooda inta lagu jiro dhibaatada fitnada, ama ballamo xoog lagu jiro xukunka ka gees ah ayaa.
waxa uu noqon lahaa sida ay kiniisadda ayaa loo dhoofiyay in ay dhex maraan xilliga fitnada, Rabbiga cad diyaariyo lahaa iyo digin shirka oo arrintan ku saabsan.
Word na ugu baaqay
G uds erayga na ugu baaqaysaa in si joogto ah u leedahay filasho joogta ah soo laabashada Ciise, oo sidaas daraaddeed waa dhacdo dhab ah oo aan wax characters magac uyaalka. Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah marinnada in labada fiiqaya oo ina tusaya in kaniisadda waa nool yihiin filanayeen joogto ah Rabbigeenna Ciise si ay u yimaadaan si ay dadkiisa,
Romans 13: 11-12 - Iska eega oo dhan in, ka badan si, Sidaad og tihiin waxa silica waqtiga, in saacaddii way timid si aad u toosaan hurdada. Waayo, hadda waa ka dhaw badbaado badan marka aynu u yimid in ay aaminsan yihiin. Habeenkii hore buu u batay, maalintiina waa soo dhowaatay. Sidaas daraaddeed aynu iska dhigno shuqullada gudcurka ku riday hubka iftiinka.
1 Korintos 1: 7 - waa inaad sidaas oo in ka danbeeya waa in hadiyad no, inta aan sugayo Rabbigeenna Ciise Masiix, dajinta.
File 3:20 - Waxaan leenahay doonaa dhalashada jannada ku jira, oo halkaas ka sugno, oo Rabbigeenna Ciise Masiix oo Badbaadiyeheenna ah sida.
Filiboy 4: 5 - ha roonaantaada ayaa lagu yaqaan in ay dadka oo dhan. Rabbigu wuxuu u dhow yahay!
1 Tesaloniika 1:10 - iyo sugtaan Wiilkiisa uu ka yimid xagga jannada, kii Ciise kuwa dhintay ka soo sara kiciyey, Ciise, cadhada imanaysa kan ina badbaadiyay.
Ninba 2:13 - halka aynu ku sugnaa rajada barakaysan iyo Ilaaha weyn oo ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix, muuqashada ammaanta.
Cibraaniyada 9:28 - oo uu mar labaad ka soo muuqan doona, ma dembi qaadine laakiin in uu badbaadiyo kuwa isaga sugaya.
Cibraaniyada 10: 37 - Waayo, waxaa weli halka gaaban yar, isagu waa kan iman lahaa, oo wuxuu innaba ma raagi doonaan.
James 5: 7 - sidaas daraaddeed samir ku sug, oo walaalo ah, ilaa Rabbigu imanayo.
James 5: 8 - waxaad sidoo kale Noqo raagaya iyo qalbiyadiinna xoojiyo, waayo, imaatinka Rabbigu waa soo dhow dahay.
1 Butros 4: 7 - dhamaadka ah ee wax walba u dhow yahay.
Jude 1:21 - nafsaddiinna ku haya jacaylka Ilaah xaji, inta aad sugto Rabbigeenna Ciise Masiix in uu naxariis idin siin doonaa nolosha weligeed ah.
Up 3:11 - dhakhsaha badan aan doono. Qabo wixii aad qabto, si aan ninna taajkaaga kaaga qaadin.
Muujintii 22: 7 - "Oo bal eeg, anigu dhaqsaan u imanayaa.
Muujintii 22:20 - kan waxyaalahan ka markhaati furayaa wuxuu leeyahay, "Haa, anigu dhaqsaan u imanayaa." Aamiin, yimaadaan, Rabbi Ciise!
Sidaas oo intaasu waxay ahayd qaar ka mid ah meelihii ee Kitaabka Quduuska ah in aad na tusto filanayay in Goluhu ay leeyihiin waa in. Words in laga hadlo soo celinta Rabbiga la xiriira, iyo Golaha u baahan tahay in mar walba la diyaariyey. Waxay ka hadlayaan soo laabashada Rabbiga oo aan calaamado ka hor, oo ay bixiyaan raaxada iyo dhiirigalin oo aan iyaga la xidhiidha dhibta.
Imanayaa - Waxaad Eebahanno yimid
1 Korintos 16:22 - Haddii qof uusan Rabbigu ma jeela, isagu waa inay xaaraan ka. Marana tha.
E ne of doodaha ugu xoogga badan, waayo, kaniisaddii hore ku noolaa filasho joogta ah soo laabashada Ciise waa sida ay u midba midka kale Salaamo iyo in Bawlos waxa uu adeegsanayaa in mid ka mid ah waraaqaha uu: Marana'ta.
Eraygii Marana'ta waa Aramaati oo macnaheedu yahay "Waxaad tahay Sayidow, kaalay!" Waxa ay ahayd hadal ah oo la doonayay la Assembly ee iyo fahamka in Rabbigu waxay u iman kara wakhti kasta. Haddaba Bawlos waa marka qoray salaantan xiritaanka in 1 Corinthians 16, waxa uu sheegay in haddii ay jirto cid aanu Rabbigu ma jecel, wuxuu ahaan doonaa "inkaarnaado". ereyga macnihiisu waa u cadhooday, ka dibna habaaray ka "tha Marana," Rabbiga soo socda.
Haddii Golaha ma lahayn rajo ah in Rabbigu waxay u iman lahaa, iyagoo aan loo isticmaalo this Salaan, taas oo labada salaadda a, codsi iyo call a for soo laabashada Ciise.
Paul sugayay Rabbiga
1 Tesaloniika 4:15 - waxaan idinku leeyahay by ereyga Rabbiga, waannu ka kaas oo kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka Rabbiga iyaga ma ka hortagi doonaan taasoo hurdaan
Paul erayga adeegsanayaa "aan" markii uu carrabaabay, kuwa kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka Rabbiga, taas oo muujinaysa in rayrayn ee asal ahaan hore u dhici karaa waqti ah ee Paul.
James 5: 8 - waxaad sidoo kale waarta Iska iyo xoojin qalbiyadiinna, waayo, imaatinka Rabbigu waa u dhow
Track ee maalin Paul ee ahayd dhow soo laabtay Rabbiga, oo wuxuu ku dhiiri shirka in ay ku noolaadaan filanayeen joogto ah Ciise samada ka.
Marka aan ka hadlo turjumeysa waqtiga aan ku nool nahay, oo rumaysan nahay inaynu waa qarni ah in la kulmi doonaan soo celinta Rabbiga, markaas waa inaan is barbar qof nebiyada dhibaatadii. Sababtoo ah calaamadaha aan arki karnaa in maalinta Rabbiga socdo, iyo xanuun dhalashada kordhiyo.
In si kale loo dhigo, calaamadaha gudaha iyo dibadda kaas oo tilmaamaya in 70aad iyo toddobaadkii ugu dambeeyey ee sano ee soo socdo, oo sidaas sidoo kale rayrayn shirka.
The Aabbayaashow Rasuullada
J Esse Forest Silver, ku qoray buuggiisa "Return Rabbigu ku qoray oo ka mid ah Aabbayaashow Rasuullada:" Waxay la filayaa soo laabtay Rabbiga in uu waqti. Waxay la noqotay in wakhtigii la xiriira, sidii Rabbigu iyaga wax baray in ay aragti feejigaan. (13)
John F. Walvoord, fiqi a Christian koobayaa sidan: "element dhexe oo ka mid ah pre-trib bowdyaha, kuwaas oo cilmiga imminenta Rabbiga iyo soo laabashada la xiriira, waa door weyn ee kaniisaddii hore, kuwaas oo ku noolaa filanayeen joogto ah Rabbiga ee soo socda si uu u shirka. (12)
H istorien noo muujinaysaa in in kasta oo ay la'aanta weyn ee aragtida nebiyada, ama spiritualization ee hadalka nebiyadii ku dhowaad 1000 sano ilaa toobad, sidaas darteed waa taariikhda kaniisadda in kaniisaddii hore iyo Aabbayaashow hore lahaa filasho joogto ah ee Ciise socda.
Pre-millennialism, taasoo ka dhigan in soo laabashada Ciise dhici doona ka hor inta Millennium macno dhow la waayay ka dib markii Golaha Efesos, golaha ah ecumenical ee 431 AD, waxaa la go'aamiyay, oo ka fiirsaday sida dhaxaltooyo. Waxa ay ahayd ka dib inta lagu guda jiro toobadda in aanu arki karin sida hadalka nebiyadii mar nool noqday sameeyey.
cilmiga Pre-trib waxaa habeeyay in 1800 by kooxaha John Somali, laakiin in la yidhaahdo in cilmiga ma wakhtigaas ka hor inta aan ka jirin, sida ku andacoodaan in "xaqnimada rumaysadka" ma ahaa cilmiga runta ah ka hor inta Martin Luther helay dajinta oo ku saabsan this. Waxa cad in dadka ku wacdiyey "xaqnimada rumaysadka" ka hor inta 1500s ah, laakiin waa Rabbiga loo isticmaalo Martin Luther ee si gaar ah in aad runta this oo ay iftiinka ugu soo celin. Sidaas oo kale ku sameeyey John Somali eego rayrayn iyo soo laabashada Ciise.
Waxaan sugaya soo laabtay Rabbiga
P recis eraygiisii na ugu baaqaysaa in sida aan la sugno socda Rabbiga. Waxaan ha sugin characters gaar ah, ama in ay dhacdo gaar ah dhici doonaan in ay xidhiidh la rayrayn. Ciise iman karaan waqti kasta, kaas oo sidoo kale waa waanada iyo dhiirigalin in Rabbigu inoo qabo. filasho joogto ah in Ciise uu iman karo dib mar walba.
Waxay ahayd Paul tacsida inay kiniisadda Tesaloniika joogay, iyo uun jeclaan in ay tahay Raaxada noo. Waxaan sugeynaa u imaan, si aad u badbaadiso iyo kuwo nooga yimaadda cadhada badbaadin (1 Tesaloniika 1:10)
"The Aabbayaashow Church Early"
Paul Boyer, Marka Time ma ay jiri doonaan More: CAQIIDADA Sheegidda in Modern American Dhaqanka (Cambridge, MA, Belkndap Press, 1992), bogga 75aad
Paul N. Benware, End Understanding Times Sheegidda, 1955 bogga 197-198)
Tommy Ice, "Morgan Edwards: A Pre-Somali Rapturist," The Conservative fiqi Jounal, 1997 bogga 4-12.
Dave Macpherson, ayaa la rumaysan karin Pre-Trib Asal, 1973
Shepherd ee Hermaas, Nuqul ka mid ah qoraaladii complte of The Sherherd of Hermaas waxaa laga heli karaa internetka.
"St. Ephraem ee Encyclopedia Catholic ku saabsan internetka
Crutchfield "rajada barakaysan iyo Dhibaatada ee Aabbayaashow Rasuullada, bogga 88-101
Paul N. Benware, End Understanding Times Sheegidda, 1995 bogga 10-12
Warqadda Koobaad ee Clement, 23 (qoraal ah oo ku saabsan 96 AD)
John F. Walsvoord, Su'aasha qaadida The Revised iyo ballaadhisay Edition, Zondervan, Grand Rapids, 1979, 51aad
Jesse Silver Forest, soo noqo Eebayaal The, New York 1914, 62-63
Dhawray saacaddii "bogga 221-222
D et Tani waa qayb ka mid ah shanaad ee taxanaha "laabashada Ciise ka hor fitnada," taas oo ah difaaca ah ee rayrayn ah aroosadda Ilaah iyo shirka ka hor ilaa todobaadkii la soo dhaafay of sano, iyo Dhibaatada helo ay ku bilaabatay.
Inkastoo rayrayn waa mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon NT iyo Assembly, sidaas darteed waxaan weli ka arki kartaa dun guduudan yahay iyada oo loo marayo images iyo calaamadaha ee GT. post Tani waxay qaadanaysaa Bar bilaw in sheekooyinka in Enoch, Luud, Rebecca iyo Isxaaq, Ruth, Rahab, iyo Daniel, oo ay muujinaysaa sida ay Rabbiga la xiriira dhibaatada iyo Golaha a. Waxaan chronologically bilowdo sheekada Enoog:
E kr waa in siyaabo badan oo duug ah testamentlig Pre-shot of Assembly, taas oo laga yaabaa in middani labada dhalashada laftiisa, laakiin sidoo kale markii ugu dhibcood for rayrayn shirka.
Haddii aan dhimasho wejiga
Cibraaniyada 11: 5 - By Enoog rumaysad baa lagu sii qaaday oo aan soo food dhimasho. Oo waxay arkeen ma aanan helin, maxaa yeelay, Ilaah baa isagii qaaday ayuu naftiisa u.
E kr ayaa lagu qabtay iyaga oo aan dhadhankiisu dhimasho waayo, Rabbigu wuxuu isagii qaaday ayuu naftiisa u. Meeday Enoch ku dayasho leh fantastic shirka kuwaas oo isku ballan cajiib ah.
In maalin maalmaha ka mid la doortay, in la kor loogu qaaday Rabbiga, laakiin in ay la kulmaan geeri, iyo kuwa horay u hurdo, aan oo weli nool oo hadha, in la qabto ballan Rabbiga inuu ka hor tago oo cirka jooga.
D et ahaayeen saddex nooc oo kala duwan oo dad ah kuwaas oo ku noolaa in wakhtigii Nuux ahaa ka hor inta daadkii yimid. Waxay ahayd kuwii gaaloobay kuwa diidday Eraygii Rabbiga, halkaas oo ay dhammaan ku halligmeen daadka. Waxa uu ahaa Nuux iyo qoyskiisa oo la wada ilaaliyo, iyada oo loo marayo daad, oo ay ahayd Enoch kii loo qabtay ku yidhi Rabbiga hortiisa daadkii yimid.
Mid kasta oo hab iyaga u gaar ah u matalaan dadka saddex qaybood oo kala duwan in aanu is barbardhigi kartaa in waqtigeena maanta. In kaliya si la mid ah waxaan arki saddex nooc oo dadka maalintii marka aynu u socdaan jihada fitnada iyo dhameystirka waqtiga.
Dadkii ku socon ee
M änniskorna kii ku dhintay in daadkii wakhtigii Nuux ka dhigan kuwii gaaloobay, kuwaas oo aan qaaday in Ciise sida ay badbaadiye. dadka tegi doonaa fitnada, oo loo soo bandhigin cadhada Ilaah. Kuwa aan toobad Dhibaatada lagu xukumi doono Ciise, ka dibna waxaa lagu tuuri doonaa baddii ololaya oo dab.
Noa waa Israa'iil
N o ka dhigan ka hadhay reer binu Israa'iil oo Rabbiga buuxi doonaa nidarradaydii ay la 1000-sano Reich ah. Nuux waxaa sidaas la doortay reer binu Israa'iil, oo si gaar ah la ilaalin doonaa inta lagu guda jiro fitnada. 3.5 sano galay Dhibaatada Mu'miniinta doonaa Yuhuudda in ay ka cararaan cidla ah meeshii Rabbigu wuu dhawri doonaa, waayo, ka gees ah iyo cadaadis. Nuux waxaa la ilaashaa daadkii oo waxaa sidoo kale qayb ka mid ah dadka Yuhuudda ah in ay noqon doonaan.
Enoch waa sawir shirka
E kr waa sawir ah shirka, kuwaas oo aan qayb ka mid ah Flood iyo xukunka Ilaah ahaayeen markii uu uu qabtay iyo qaaday by Ilaah hortiisa daadkii yimid.
Enoogna wuxuu jiray waqti marka Rabbiga dunida xukumo. Markii goolka dembi la gaaray, sidoo kale yimid xukunka Ilaah on dembiga maalintii Nuux kolkaasuu u cid diray daadkii, laakiin markaas waxaa Enoch horeba kor loogu qaaday xagga Rabbiga. Flood waa sawir oo cadhada Ilaah ku jirto dhulka ku soo dayn doonaa, oo dadka sharka leh ee jeer dhamaadka - cadhada imanaysa (1 Tesaloniika 1:10). Sida Enoch, sidoo kale Assembly in la kor ka hor inta ay vredenstid soo baxa dhulka u taliyo.
2 Butros 2: 6-9 - The magaalooyinkii ahaa Sodom iyo Gomora, wuu eedaysnaa si ay u baabba'aan. Oo wuxuu iyagii ku riday dambaska iyo siiyey oo tusaale u ah waxa ku dhici doona in kuwa sharka leh. Laakiin wuxuu ku badbaadiyey xaqa Luud, oo ahaa lahu derdereen nolosha kuwa sharka dissolute. - Ninka xaqa kuwaas oo iyaga dhex socdayba, oo maalin ka maalin, waxaa ku silcayaa waxaa naftiisii xaqa by markuu arkay oo maqlay wax shar ah ayay ku sameeyeen. - Rabbigu waa yaqaan sida kuwa cibaadada leh si ay u bixiyaan ka soo jirrabaadda oo aad wada xajisaan xadhiga dulmi iyo ku cadaabo ilaa maalinta xisaabta. Tarjamada Afka: si aad u badbaadiso kuwa cibaadada leh jirrabaadda ka
N waa Peter qoray iyo bara kiniisadda in mid ka mid ah waraaqaha uu, uu isticmaalo tusaale ahaan reer Luud oo ahaa sida noocooda ah, oo ina siinaysaa tusaale wax ku ool ah oo jidka in Rabbigu dadka uu ka waqti iyo meel marka ay timaado xukummadii Ilaah iyo waqtiga maxkamadda badbaadiyay ( ka maxkamad - turjumaad eng).
Ibraahim xusuusinayaa Sayidka
1 Bilowgii 18: 23-25 ​​- Oo Ibraahim baa u dhowaaday, oo wuxuu yidhi, "aad xaqa ah kuwa sharka lehna la wada baabbi'in doonaa, Waxaa laga yaabaa in ay jiraan konton qof oo xaq ah oo magaalada jooga Ma rabtaa inaad sidoo kale ku baabbi'iyaan, iyo meesha aan u tudhin ee konton qof oo xaq ah in ay yihiin?. halkaas? in ay fog tahay inaad samayso wax u eg in, si aynu u dhinta xaqa ah kuwa sharka leh. haddaba biiri lahaa xaqa ah kuwa sharka leh. waxa ay noqon fog, ma uu dunida oo dhan xaakinka samayn lahaa waxa xaqa ah ? '
A Braham Rabbiga waaniyey wax xuja ah oo ku saabsan Sodom iyo Gomora, waa lid ku ah uu dabeecadda kan xaqa ah kuwa sharka lehna la baabbi'in weheliyaan.
By ina siinaya tusaale ahaan reer Luud oo ahaa, bara Butros, si ay u muujiyaan in Luud ma ahayn tusaale ahaan ku meel gaar ah, laakiin mabda 'guud ka dhanka Ilaah, Rabbiga mar walba "Badbaadiya kuwa cibaadada leh jirrabaadda ka mid ah"
Rabbiga ka fog magaalada Luudh qaadataa
D et sidii Rabbigu ka xukunka badbaadiyey Luudh tegi lahaa oo magaalada dibaddeeda ah, waxay ahayd inuu isaga jidh guurto ka Sodom. Mana aha Eebaha mid si fudud aadan magaalada ma xukumi karo oo wax samayn, waayo, sidaas dheer Luud ahaa jidh ahaan magaalada.
Luudh waa sawir ah shirka, oo waa laga qaaday waqtiga iyo meesha ka hor in xukummadii Ilaah soo baxa. Waa, in erayada kale ee dabiiciga ah ee Rabbiga ma inaan kuwa xaqa ah oo ay la socdaan kuwa sharka xukumo.
Rebecca iyo Isxaaq
1 Bilowgii 17: 4 - "Bal eeg, kanu waa axdigayga aan idinla: Waxaad noqon doonaa aabbihiis oo quruumo badan.
1 Bilowgii 17: 6 - waxaan ka dhigi doonaa in aad aad u bacrin ah, oo waxaad ka samaysaa quruumaha kuu yimaadaan ka, iyo boqorradii aad ka soo degi doonaan.
In Saks dhalashada, wuxuu ahaa dhammaystirka ballan qaadyadii Ilaah siiyay Ibraahim. Rabbigu wuxuu balan qaaday Ibraahim wiil la Sarah, iyo Ibraahim wuxuu noqon lahaa quruun weyn, iyo aabbe quruumo badan iyada oo loo marayo Isxaaq.
Sayidka Rabbiga ahu wuxuu imtixaamaa qalbiga Ibraahim
N waa Sara waa sagaashan sannadood, ku dhasho, iyada u ballan qaaday wiilkeeda iyadoo da'weyn, kaliya jidkii uu Rabbiga u ballanqaaday Ibraahim iyo Saarah. Isaac markaas ilmo kaliya ay, in Rabbigu oofiyo lahaa axdigiisii iyo ballamada uu marayo.
markii qaar ka mid ah ka dib isku dayaya Eebaha wadnaha Ibraahim, iyo weyddiiyaan oo ku yidhaahdaan si ay u tagaan saddex maalmood loo socdo oo marti, si ay allabari. qurbaanka la gubo meesha allabariga ku noqon lahaa Isxaaq, wiilkiisa keliya oo la jecel yahay.
Isxaaq, sawir ah Masiixa
N Ibraahim waa addeecay inuu Rabbiga, oo sidaas daraaddeed waa dhacdo oo dhan hooska waxa Ilaah sameeyey iskutallaabta qaar ka mid ah 2,000 oo sano ka dib, oo waxaa jira wax badan oo ka mid ah taariikhda soo jeedinaya in Isxaaq waa sawir cad u ah Ciise Masiix;
Rabbigu wuxuu Isxaaq u yeedhay, "wiilkaaga keligiis ah" Ibraahim, inkastoo Ibraahim horay laba wiil lahaa waqtiga. In si la mid ah, Ciise waa Wiilka Ilaah oo keliya ee. (1 Bilowgii 22: 2)
Isaac la gowraco lahaa meeshii Ciise ku allabaryi on height leeyay. (1 bilood 22:14)
Safarku wuxuu meeshii allabariga ka qaaday saddex maalmood ah, sida Ciise uu ahaa in qabriga saddex maalmood iyo afartan habeen. (1 Bilowgii 22: 4)
Isaac bar laftiisa qoryihiina allabariga la gubo ilaa meesha, waxayna noqotay sidii Ciise qaadeen inuu iskutallaabtiisa wadada la soo dhaafay in ay ka gudbaan. (1 Bilowgii 22: 6)
Ibraahim iyo Isxaaq wada iyo riwaayad ku socday, si la mid ah in Aabbaha iyo Wiilka ahaayeen in heshiis. (1 Bilowgii 22: 8)
Isaac sidaas waa sawir cad Ciise, iyo shuqulkii uu dhacay on iskutallaabta leeyay. Ibraahim gabi ahaanba isku halleeyey Rabbiga ah xaaladda, oo waxay rumaysteen Ilaah in Isxaaq mar kale dib u bilaabi doono ka dib markii uu dhibbanaha.
Addoonkii Eliiceser - sawir ah Ruuxa Quduuska ah
1 Bilowgii 15: 2-3 - Laakiin Aabraam wuxuu yidhi, "Rabbow, Rabbow, maxaad i siin doontaa? . Maxaa yeelay, waan ka sii socdaa, iyo kii dhaxalka lahaa gurigayga Eliiceser oo ah reer Dimishaq "Aabraam dheeraad ah ayaa sheegay, "Bal eeg, Anigu ma aan soo saaray farcankaaga kasta. Mid ka mid ah qoyskayga igu dhaxli doonaa. "
S unifier markii Isxaaq la si aad u hesho aroosad, addoonkiisii Ibraahim ugu da'da weyn diraa in his shaqo guri, Eliiceser si aad u hesho aroosadda ah Isxaaq, ka mid ah qoyskiisa u gaar ah. Meelna in sheekada oo dhan cutubka 22, aynu aragno magaca addoonkii ee. Laakiin in 1 Baxniintii cutubka 15: 2 waxaan ka baranaynaa in anigoo addoonkaaga ah ugu weynaa Ibraahim magacaabay Eliiceser, iyo markii hore ahaa kii dhaxalka lahaa in guriga Ibraahim.
In John 15: 26-27, wax badan oo ku saabsan Ruuxa Quduuska ah waxa aan ka baranaynaa. Wuxuu qayb ka mid ah Aabbuhu kuma jiro, oo ka marag Masiixa. Waxa uu sidoo kale waa gargaare iyo Ruuxa runta.
Addoonkii Eliiceser waa sawir ah Ruuxa Quduuska ah. Waxa uu la soo diray by Ibraahim. Waxa uu ahaa si qarsoodi ah iyo ma kala hadli ku saabsan naftiisa, laakiin waa u marag furay for Rebecca, aroosadda mustaqbalka Isxaaq. Sidoo kale ku hadla, Ruuxa Quduuska ah ma aha isaga qudhiisa ku saabsanaa, laakiin tilmaamaya oo ku markhaati fura wax Ciise ku saabsan kaniisadda. Eliiceser Rebecca kulmaan oo ceelka biyaha, kaas oo noqon kara sawir ah xilkani Ruuxa Quduuska ah ee nolosheena. Magaca Eliiceser macnaheedu waa la mid ah sida Ruuxa "qalbi qaboojin" Quduuska ah.
Rebecca - aroosadda Masiixa
P si la mid ah in Isxaaq waa sawir ah Masiixa, oo addoonkii Eliiceser waa sawir ah Ruuxa Quduuska ah, Rebeqah waa nooc ka mid ah Church, aroosadda oo ah Masiixa.
Rebecca ka yimaado magaalada la mid ah sida Ibraahim, oo markaas ku jiifsatay Baabuloon. Baabuloon waa sawir of this dunida, kaas oo sidoo kale waa doonistii kiniisadda oo la baxsan qaaday. Rebecca sidoo kale waa qof qaraabo ah oo Ibraahim, iyo waa isku mid sida dadka Masiixiyiinta ah oo dhan, ruuxa ku hadla, farcankii Ibraahim. (Rome 4:16)
Rebecca sidoo kale heli hadiyado Eliiceser markay la kulmay isaga, kaas oo Ruuxa Quduuska ah si la mid ah, Golaha haybiyaan sida iyaga siday doonayeen. Marka Rebecca hadlay addoonkii, ayay guriga waddaa oo uu inoo sheegayaa wax walba iyadu way aragtay iyo khibrad. hawsha Golaha waa in ay dibadda u baxaan oo la hadal oo ku saabsan "war wanaagsan" oo ku markhaati fura in kulli wixii Rabbigu ku sameeyey oo nolosheena.
T jänaren Eliiceser gaaray fiidkii si fiican u ah ee magaalada, halkaas oo Rebecca nool. Habeen ayaa u taagan disorder, fowdo iyo jahawareer, halkaas habeen baa imanaysa, oo waa sawir ah Dhibaatada iyo Maalinta Rabbiga.
Annaguna waxaan u aragnaa in si la mid ah in 1 Bilowgii 24:63, halkaas oo Isxaaq la kulmay aroosadda mustaqbalka fiidkii. Kolkaasuu wuxuu iyada ku heli doontaa, oo isna kolkaasuu iyadii ku keenaa wuxuu galay teendhadii hooyadiis, halkaas oo Rebecca noqdo xaaskiisa Isxaaq.
bikrad A daahirnimada xagga Masiix,
V si ay u bartaan in Rebecca waa gabar yar, kuwaas oo ninna soo dhowaaday (1 dartaa 22:16). Sidoo kale, shirka sida bikrad daahir ah Masiixa, oo u doonanayd nin ka mid ah.
Marka ay dhamaato sheekada, mid dartaa 24: 62-67, waxaan aragnaa in Isxaaq (aroos) Laabtay fiidkii, ka hor inta habeenkii (ee Dhibaatada), iyo Eliiceser (Ruuxa Quduuska ah) oo ku saabsan in la keeno (rayrayn) Rebecca (aroosadda) si ay ula kulmaan waa Isaac fool ka fool ah markii ugu horeysay. Sidoo kale, Ruuxa Quduuska ah, in xididada loo siibo shirka, fiidkii, ka hor inta ay habeen iyo dhib bilaabmaa, iyo waxaan ka heli doonaa si ay u arkaan iyo arooska kulmi Rabbiga ah markii ugu horeysay.
Yashuuca 1:. 2 - "Addoonkayga Muuse ahaa waa dhintay Haddaba adiga iyo dadkan oo dhanba, kac, oo Webi Urdun,, dalkii waxaan siin reer binu Israa'iil.
H istorien Rahab ayaa qarka u saaran ku saabsan 500 sano kadib markii Isxaaq iyo Rebeqah ee Genesis 1 24. Taariikh ahaan, wax badan oo ku dhacay Israa'iil inta lagu jiro xilliga this.
Israa'iil waxa ay soo martay muddo addoonsiga ee Masar, ka dibna sida Rabbigu mucjisooyin nabadgalay oo dad uga badbaadiyey addoonsiga by Muuse. Ka dib markii dadka Yuhuudda wareegi jireen lamadegaanka 40 sano, Sayidku wuxuu ku soo Yashuuca, kuwaas oo keeni lahaa dadka si ay u jabiyaan cadowga oo waxay qaadan doonaan dalkii yaboohay balan qaaday in Ilaah u ballanqaaday safray.
Laba nin oo basaasyo ah ee Yerixoo
Jos 2: 9 - "Waan ogahay in Rabbigu dalka idin siiyey iyo in cabsi aad ee nagu dhacday, iyo in dadka oo dhan idiinka cabsan.
In shaandhaynta iyo in Israa'iil degan Yerixoo, labada basaasyada diray rag soo basaasa dalka iyo magaalada Yerixoo. basaasyo ayaa ogaadeen oo doonaya magan dhilladii Raxab, kuwaas oo dhuuntaa ah laba nin oo basaasyo ee waawayn magaalada kuwaas oo raadinaya nin la.
Rahab u qirayaa inuu rumaysad iyo xukun indheeyayaal ah, Ilaaha reer binu Israa'iil siiyey iyaga ayaa dalka. Waxay weydiinayaa sababta indheeyayaal inuu siiyo yaboohay yabooh run ah ilaalinta, labada iyada iyo qoyskeeda maalinta Israa'iil degan magaalada for.
E TT string cas furmo, waxay noqon lahayd calaamad in ay ahayd meesha Rahab iyo qoyskeeda soo ururay. Marka askarta Israel arkay xarig ah, degsan oo waxaa iyagii badbaadisay Rahab iyo qoyskeeda ka burburinta sidii basaasyadii bay u ballanqaaday.
S Kokan Rahab waa sawir shirka. Iyadu waa jaahilka ah, naag dhillo ah oo dambiile ah oo qirta rumaysadkiisa ku ah Ilaaha reer binu Israa'iil. Waxay dan, halka dareen for dadka Yuhuudda ah, taas oo sabab u yahay iyada badbaadada.
Yerixoo waa sawir of this dunida, kaas oo la badbaadiyey iyaga u. Rahab (Assembly) laga saaro Yerixoo (World), ka hor in magaalada Halaagnay iyo gubay (Dhibaatada)
R buugga UTS loo yaqaan "furashada Love Story," iyo wuxuu ku saabsan yahay Nimco, qof dumar ah oo Yuhuudi Beytlaxam khasaariyey dalkoodii sababo la xariira macaluusha ee Israa'iil, ka dibna lagu qasbay in ay dalka Moo'aab (Urdun) in ay ka cararaan.
Muddo gaaban kaddib, ninku dhinto oo keli ah iyo dadka saboolka ah iyada tago waddan shisheeye. Ka dib markii jeedo abaar Nimco Beytlaxam la gabadheeda Ruth, kuwaas oo ku dhaartay inaan marnaba la iska Daaya ha ku noqdeen. Ruth waa qof dumar ah oo reer Moo'aab kuwa guursaday mid ka mid ah wiilashii Ruth ayaa sidoo kale ku dhintay. Marka labada dib Beytlaxam yihiin, sidaas noqday nin caan ah Yuhuudi, Bocas, jacayl la Ruth oo uu guursado.
By sharciga furashada iyo guurka, waxaan la kulmaan labada Nimco iyo Ruud tii furashada, iyo Nimco ay dalkoodii dib ugu heli, iyada oo laga badiyay.
H istorien of Ruth waa sheeko la yaab leh dhalashada, badbaadada iyo madaxfurashada, laakiin sidoo kale siinaysaa sawir calaamad shirka iyo dhib.
Nimco waa sawir ah reer binu Israa'iil, iyo Ruth waa sawir ah Golaha quruumaha kii guursaday la förlösaren, nin Yuhuudda Bocas, kan ah sawir ah Masiixa. Nimco in ay ka cararaan dalkooda, sababtoo ah ee abaarta ah, sida reer binu Israa'iil laga saaray dalka 2000 sano ka hor. kaniisadda wuxuu lahaa qayb ka mid ah Masiixa by Yuhuuddii rumaysadka, halka adkaansho in qayb ka mid saameysey reer binu Israa'iil (Romans 11:25).
On habka ay u Israa'iil (Nimco) soo furto, si ay qaataan Masiixa aroos jaahilka (Ruth). Bocas furtaa oo badbaadiyay labada Ruth iyo Nimco in xaaladda ay ku sugan tahay, iyo abuurayaa dambeyntii Israa'iil (Nimco) si buuxda.
S amtidigt sidaas waa warkii Ruth, sawir ah kiniisadda in Rabbigu badbaadiyay dhib baxsadaan.
Waxaan ka heli saddex xaaladaha cutubka saddex marag in this. First, Ruth hoos u dhaco si tröskeplatsen sida hooyadeed iyada weydiiyo. Second, Bocasna wuxuu soo toosay oo at helay Ruth markii saqdii dhexe markay doondooneen magan isaga la. Mar saddexaad, Ruth helay ogolaansho in ay qarin hoos dharkii Boas , kan Fidiyay uu darafkiisu iyada, Bocasna wuxuu caawa noqday Bixiyihiinna ah.
Tröskeplatsen - Sawir dhibaatadii
T röskeplatsen waa sawir oo xukun, iyo dhib aan la kulmaan meelo badan oo labada Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub (Amos 1: 3, Isaiah 21:10, 41: 14-16, Muujintii 14: 19-20).
The habeen iyo subax, sidoo kale waa sawir ah labada Dhibaatada, Qiyaame iyo dib u soo celinta. Ciise waa la hadlay oo habeenka soo socda halkaas oo aan ninna shaqayn karin (John 11: 9), iyo Paul oo ka digtay in Maalintii Rabbiga, kaas oo ah waqti ka mid ah xukunka u iman doontaa sida tuug habeen ah (1 Tesaloniika 5: 2).
Inta lagu guda jiro Boas go'iisii ​​difaaca
Ruth 3: 9 - "Yaad tahay?" Markaasuu wuxuu weyddiistay. Waxay ku jawaabay: "Waxaan ahay Ruth, anoo addoontaada ah. Soor ee aad manteflik ka badan anoo addoontaada ah, waayo, waxaad tahay kii i soo furtay.
R baxay lahaa si ay u qariyaan hoos Boas dharkii cagihiisa ag dhigay ilaa habeenkii ku jiray in ka badan oo mar kale subax.
In si la mid ah, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu dhawri doonaa, wuuna qarin shirka lagu guda jiro waqti cadhada, habeen ee soo socota, Ilaa madawga ayuuna wixiisii ​​oo waagu beryo. meel Assembly inta lagu guda jiro Dhibaatada ka, waxay noqon doontaa hoos go'iisii ​​Rabbiga, Yeruusaalem oo jannada, oo hoos bacdi oo ka mid ah qolalka samadu.
Dadkaygow, kaalaya oo tagaan qolladihiinna
Ishacyaah 26: 17-21 - Sida naag ko'ga uurka leh marka ay ku saabsan inay dhalaan, oo ay xanuun qayliyo waa, sidaas darteed waxaa inala kugu yidhi, Rabbiyow. Waxaan uuraysatay, oo way cabsadeen, laakiin waxaan u dhashay dabaysha. Waxaan aan kasbaday badbaadinta ku dalkii, oo ninna ma dhasho in ay ku noolaadaan dhulka. Laakiin dhintay si aad ku noolaan doonaa; jidhkooda kici doonaa. Toos oo gabya, waxaad ku nool ciidda, waayo, dharabkaagu waa sida dharabka a iftiinka, iyo dhulka siiyo doonaa kuwii dhintay. Dadkaygow, kaalaya oo tagaan qolladihiinna galay, albaabbada xidha aad ka danbeeya. inaad ku dhuumato daqiiqad kooban ilaa ay cadhadii ayaa maray by. Waayo, bal eega, Rabbigu wuxuu soo baxa uu meel u cadaabo dadka dhulka deggan xumaantooda aawadeed. Dhulkuna wuxuu ka dhigi doonaa dhashay daymaha dhiigga iyo in dambe qarin laayay.
D et cutubkan of Isaiah ka kooban yahay Aayado la yaab leh in marag in Rabbiga ah yeedhan doonaa dadka, uu qarin doonaa, oo iyaga dhawri qolalka oo ay xidhiidh la leh cadhada waqti dhigay dhulka.
Ma arki karaa in tuducdan ka Isaiah abid ka hor ayaa la fali. Waxa aanu sidoo kale ku raacsaneyn sarakicidda in Ciise ku wacdiyey, iyo Daniel sheegayaa Daanyeel 12: 2, oo aan og nahay dhici doona ka dib markii Dhibaatada iyo ka hor. Halkan Isaiah hadla halkii, Sarakicidda kuwii hore waxay dhacdaa marka Rabbiga oo ku baaqay dadkiisa in qolalka ay, iyo ka hor iyo ka hor cadhada Ilaah iyo xukummadii uu soo gelayoba dhulka u taliyo.
Sida qof dumar ah oo uur leh
Muujintii 12: 1-6 - calaamo weyn ugu muuqday oo jannada ku jira: qof dumar ah oo qorraxda huwan, oo leh dayaxuna wuxuu ka hooseeyey cagaheeda iyo taaj laba iyo toban xiddigood on iyada madaxa. Iyadu waa uurka leh iyo kuwa iyagoo qaylinaya in dhib iyo daal.
P si la mid ah sidii Isayos, John arko qof dumar ah oo xidhiidh la leh dhammaadka wakhtiga waa uurka leh iyo foolanaysa oo kale. Kaniisadda marna soo bandhigay sida naag foolanaysa ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin waxa ay taasi Dhanka kale, Israa'iil. naagtuna waxay tahay sawir ah labadaba Yuhuudda Masiixa waqtiga Ciise, iyo Yuhuuddii Masiixa lagu jiro fitnada.
Israa'iil waxay leedahay saddex dhalmada ayay u leedahay in ay dhex maraan ka hor inta ay ka tagto boqortooyada 1000 sanadka. Dhammaan saddex dhalashooyinka kuwan waxaa lagu tilmaamay in Isaiah cutubka 66:
Ishacyaah 66: 7-8 - Ka hor inta Siyoon ogaan qof foolanaysa oo kale, gabadh dhasho ilmaha (Ciise). Ka hor inta ugu taahi ayay iyada ku kor, iyadu dhashay ilmo lab. Yaa maqlay waxaas oo kale yaa arkay wax la mid ah? dal ka iman kara nolosha hal maalin (1948), ama quruun mar (badbaadadii dadka Israa'iil) dhalan, sababtoo ah Sion dhalaan carruur ay hore u marka xanuunka foosha bilaabaan?
Sidaas daraaddeed, oo xidhiidh la leh foolanaysa oo kale in reer binu Israa'iil la kulmi doonaan, iyo ka hor inta cadhada waqti, Rabbiga ha ku doonaa dhintayna waa la kiciyey, oo wuxuu dadkiisa ayuu naftiisa u yeedhi doonaa, si ay u qariyaan in qolalkiisa.
John matalaa kaniisadda this in la mid ah la kulmi doonaan on uppryckandets maalintii. Iyada amarka ah, cod malaa'igta sare iyo buunka Ilaah, shirka ayaa laga soo qabtay doonaa samada iyo arki doonaa dhib kala fur dhulka.
H istorien ku saabsan Daniel iyo saddexdii nin ee foornada dabka ah oo ololaysa, waa mid ka mid ah sheekooyinka ee Axdiga Hore muujinaya sawir cad ka mid ah dhib iyo dhamaystirka mustaqbalka.
Daniel ayaa la gadaya oo xukunka, riyooyin, riyooyin iyo waxa uu ahaa dhammaadka wakhtiga inuu sameeyo. Si ka duwan kitaabka Muujintii, taas oo ah tilmaan faahfaahsan oo ku dhibta, bilowda Daniel badan kaabiga a time dheer, labada gadaal iyo hore ee waqtiga.
Daniel - sawirka shirka
H istorien ku saabsan Daniel iyo saddexdiisii saaxiib, qaadataa meel bilowga maxaabiistii Baabuloon laga, halkaas oo afar oo dhan u adeega inta lagu guda jiro boqorkii reer Kaldayiin.
Sida Yuusuf, Daniel noqdo Qolol boos in boqorka oo keliya in ka badan isaga oo taagan. In Muujintii, kiniisadda ayaa sidoo kale qarka u saaran inay ka adeegaan hawsha wadaadnimada, iyo boqorradii dhulka this. Wax in la dhamaystiri doono in Millennium. Sidaas, tani waa Daniel sawir shirka.
Noocooda ah ka gees ah
K Young Nebukadnesar, taas oo ah tusaale cad oo ka gees ah, ayaa kor u dhigay taalada ah oo dahab ah oo ku saabsan bannaankii Duuraa oo Baabuloon. Waxaa Ogow, in taalada waa lixdan dhudhun, oo ballaadhkeeduna lix dhudhun yahay, oo waxaa loo ekaysiin karaa in ay hadal ka gees ah waa 666th
Nebukadnesar qasbo qof walba in uu hoos u dhaco oo u sujuudo set taalada this, halkaas oo noqotay cidhibtii kuwii ka faasiqoobay ahaayeen in la tuuray foornadii dabka ah oo ololaysa. foornada dabka ah oo gubanaya waa sawir ah cadhada Ilaah iyo cidhiidhi weyn ee fitnada.
Tuuray foornadii dabka ah oo ololaysa.
Malaakii 4: 1 - Bal eega, maalintii waa imanaysaa, waa u qaxmayaa sida foorno.
S adrak, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo diiday in ay sujuudaan si taalada Nebukadnesar, oo waxaa lagu tuuray foornada dabka ah oo ololaysa.
Markaasaa boqorkii wuxuu ku amray in foornada laga sii kululeeyo toddoba jeer waa in kulul ka badan aad weligaa u arkay in ay noqon, oo waa sawir ah hadalka si kaamil ah. Rabbigu wuxuu malaa'igtiisii ​​kuwaas oo la ilaaliyo Shadrag, iyo Meeshag, iyo Cabeednegoo in foornada dabka ah oo ololaysa soo diray, oo waxay u soo baxeen iyaga oo aan wax dhaawac ah ama saameyn ah dabka.
M mid Su'aashaan ayaa sheekada this waa halka Daniel meel waa. wuxuuna ka mid ahaa kuwa jilibka u sujuuday taalada? Maxaa inuusan ka qeyb galay, iyo sababta ahaa ayuu sidoo kale ma tuuray foornadii dabka ah oo ololaysa?
Waxaan noqon karaa si caddaalad ah qaarkood in Daniel waa jilibka in taalada Nebukadnesar ayaa u jilba joogsan. Daniel waxaa kaliya oo aan soo bandhigo, halkaas oo qof kasta u caabudi lahaa taalada, ama foornada dabka ah oo gubanaya dhibaatada. Ilaah waxa uu lahaa "isaga laga qaaday."
B eskrivningen sidii boqorku wuxuu lahaa nimankan in foornada dabka ah oo ololaysa ahaa in ay jireen saddex nin oo Yuhuudda (Dan 3:12). Saddexda nin Yuhuudda waa, in si kale loo dhigo, sawir reer binu Israa'iil doortay, iyo Daniel waa sawir shirka.
Daniel (Assembly), gacaliyayaalow (Daniel 10:11) ah, waa la ilaaliyay ka waqti iyo meel marka ay timaado foornada dabka ah oo ololaysa (dhib), halka saddexdiisii ​​saaxiib (Israa'iil ka hadhay), waxaa loo dhexe iyo dhex trängslen.
G eNom kuwan sheekooyinka Enoog, Luud, Rebecca iyo Isxaaq, Ruth, Rahab, iyo Daniel, waxa aan arki karnaa qaab dun guduudan yahay.
Waxaan u aragnaa dhacdooyinkii calaamad ka turjumaya oo dhibcood si ay shaqo guri ah, wakhtiga Assembly aynu ku nool. Waxaa aan arki karnaa in Rabbiga ma xidhiidhaan si la mid ah la Church, oo uu reer binu Israa'iil la. Rabbiga Labada kooxaha badbaadada uu leeyahay qorshe u gaar ah, kaas oo uu ku dhameystiri doona. Rabbigu wuxuu dhawri doonaa Israa'iil safray ka gees ah iyo fitnada, kaas oo uu ku dhameystiri doona Ballankooda iyo ballamada loo marayo.
qorshaha Ilaah ee uu kaniisadda
P on si la mid ah, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu sidoo kale si ay u dhamaystiraan qorshaha uu la jidhkiisa iyo aroosadda, kiniisadda Ilaah. Dhibaatada aan loogu tala galay aroosadda Rabbiga, oo sidaas daraaddeed Ciise haddaba ayaa u soo ceshano doonaa iyo ka saari aroosadda markaas ka hor in xukummadii Ilaah bixi doonaa inuu dhulka u taliyo.
Kaniisadda waxaa ka badbaadiyay waqtiga iyo goobta marka ay timaado final dhib iyo xukun. rajada barakaysan, Ilaaheenna iyo Rabbi Ciise Masiix, kii noo badbaadin doonaa xukunka.
Fadlan booqo blogs Miakel Walfridssons: